ကြက်ဆီထမင်းလုံး - ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ - နှမ်းထမင်း -ပဲထမင်းနှင့် ဆိတ်သားဟင်း - ခရမ်းချဉ်သီးထမင်းနှင့် ကြက်သားကြော်
• ကုလားပဲ - ၁ ခွက်
• နနွင်းမှုန့် - လက်ဖက်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ရေ - ၇ ခွက်
• ဆား - လက်ဖက်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ကြက်သွန်ဖြူ - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း (ထောင်းထားပါ)
• ချင်း - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း (ထောင်းထားပါ)
• ကရ‌‌‌ဝေးရွက် - ၄ ရွက်
• ကြက်သွန်နီ - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့် - လက်ဖက်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ဆိတ်သား - ၃၂၀ ဂရမ်
• သကြား - လက်ဖက်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ပဲငံပြာရည် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• သံပရာသီး - ၁ လုံး
• ထောပတ် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ဖာလာစေ့ - ၅ စေ့
• သစ်ကြံပိုးခေါက် - လက်တစ်ဆစ်
• ဇီရာ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း
• ဆန် - ၃ ခွက်
• နို့စိမ်း - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
၁။ ဒယ်အိုးထဲမှာ နနွင်းမှုန့်အနည်းငယ်၊ ရေစိမ်ထားတဲ့ ကုလားပဲ၊ ဆား အနည်းငယ်နှင့် ရေတစ်ခွက်တို့ကို ထည့်ပြီး ရေခန်းအောင် တည်ပါ။
၂။ ထောပတ်၊ ဖာလာစေ့၊ သစ်ကြံပိုးခေါက်၊ ဇီရာ၊ ကရဝေးရွက် ၂ ရွက် ၊ ဆန်၊ သကြားနှင့် ဆား အနည်းငယ်တို့ကို ထည့်ပြီး မွှေးလာအောင် ဆီသတ်ပါ။
၃။ ထမင်းပေါင်းအိုးထဲ ဆီသတ်ထားတဲ့ ဆန်နှင့် ပြုတ်ထားတဲ့ ကုလားပဲ၊ ရေ ၅ ၁/၂ ခွက်နှင့် နို့စိမ်းတို့ကို ထည့်ပြီး တည်ထားပါ။
၄။ ဆိတ်သားဟင်းချက်ဖို့အတွက် ဒယ်အိုးထဲမှာ ဆီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ချင်း၊ ကရဝေးရွက် ၂ ရွက်၊ ကြက်သွန်နီ၊ နနွင်းမှုန့် အနည်းငယ်၊ ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်၊ ဆိတ်သား၊ သကြား၊ ဆား၊ ပဲငံပြာရည်၊ သံပရာရည်၊ မဆလာနှင့် ကြက်သွန်ကြော်တို့ကို ထည့်၍ နယ်ပြီး ရေ ၁ ခွက်ထည့်၍ ဆီပြန်လာသည်အထိ တည်ထားပါ။ ထမင်းပေါင်းအိုးလည်း ကျက်ပြီ၊
ဟင်းလည်း ဆီပြန်ပြီး ကျက်ပြီဆိုလျှင် သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
• နှမ်းမည်း - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ကြက်သား - ၅ဝဝ ဂရမ်
• ခရမ်းချဉ်သီး - ၄ လုံး
• ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ပဲငံပြာရည်အကြည် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ငရုတ်ကောင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ကြက်သွန်ကြော် - ၁၀ ဂရမ်
• မဆလာ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
၁။ အိုးထဲ ဆီထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ နှမ်းမည်းနှင့် ဆန်တို့ကို ဆီသတ်ပါ။ ချက်မည့် ပေါင်းအိုးထဲ ဆီသတ်ထားသော ဆန်ထည့်၍ ဆားနှင့် ရေထည့်ပြီး ချက်ပါ။
၂။ ကြက်သားကို ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ဆားတို့နှင့် နယ်ပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့် နှပ်ထားပါ။ နှပ်ထားသော ကြက်သားကို ဆီပူပူဖြင့် ၅ မိနစ်ဖြင့် ကြော်ပါ။ အိုးထဲ ဆီအနည်းငယ်ထည့်၍ ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ကြက်သွန်နီကို ထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။ ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်နှင့် ခရမ်းချဉ်သီးကို ထည့်ပြီး အနှစ်ရသည်အထိ ဆက်၍မွှေပါ။ ကြော်ထားသော ကြက်သား၊ ငံပြာရည်၊ သကြားနှင့် ကြက်သွန်ကြော် တို့ကို ထည့်ပြီး မီးအေးအေးဖြင့် ချက်ပါ။ ကြက်သားကျက်ပြီဆိုလျှင် မဆလာကို ကြက်သားအပေါ်မှာ ဖြူးပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
၃။ ချက်ထားသော နှမ်းထမင်းနှင့် ကြက်သားဟင်းကို တွဲဖက်ပြီး စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
ဝက်ရိုး - ၈၀၀ ဂရမ်
ဝက်ရိုးပြုတ်ရန်ရေ - ၆ လီတာ
ဝက်သားဂုတ်သား - ၄၀၀ ဂရမ်
ဝက်အူ (အူပိတ်) - ၄၀၀ ဂရမ်
ကြက်ရင်ပုံသား - ၄၀၀ ဂရမ်
ABC ပဲငံပြာရည်အနောက် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
ABC ပဲငံပြာရည်အကြည် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
သကြား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
နာနတ်ပွင့် - ၆ ပွင့်
သစ်ကြံပိုးခေါက် - ၂ ချောင်း
ငရုတ်ကောင်းစေ့အဖြူ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
ABC ပဲငံပြာရည်အနောက် - စားပွဲဇွန်း ၅ ဇွန်း
ABC ပဲငံပြာရည်အကြည် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
ငရုတ်ကောင်းမှုန့်အဖြူ - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
ကြက်သားမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
ပီလောပီနံမှုန့် - စားပွဲဇွန်း ၁၂ ဇွန်း
ကွကျဥ - ၃ လုံး
ကြက်ဥပြုတ် - ၃-၆ လုံး
ကြက်သွန်ဖြူ - ၁၅ မြောင့်
ဆား - အနည်းငယ်နဲ့ထောင်းထားပါ
ငရုတ်သီးအနီအသေး - ၁၀ တောင့်
ငရုတ်သီးအစိမ်း - ၁၀ တောင့်
ငရုတ်သီးမှည့်အနီ - ၈ တောင့်
ငါးပိမီးကင် - ၆၀ ဂရမ်
သံပရာသီး - ၄ လုံး
ခေါက်ဆွဲအစို - ၁.၆ ကီလိုဂရမ်
1. ဝက်ရိုးပြုတ်ပါ။ ဆူလာရင် မီးအရှိန်လျော့ပြီး ၄၅ မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပါ။ ၄လီတာရအောင်ပြုတ်ဖို့လိုပါတယ်။( အရိုးပြုတ်စဉ် အပေါ်တက်လာတဲ့အမြုပ်များကိုခပ်ထုတ်ပါ။ အဖုံးဖုံးပြီးပြုတ်ခြင်းဖြင့် ဟင်းရည်ကြည်ကြည်ရနိုင်ပါတယ်)
2. ဝက်သား၊ ဝက်အူနဲ့ကြက်ရင်ပုံသားကို ABC ပဲငံပြာရည်အနောက်.ABC ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ သကြားတို့ထည့်ပြီးနယ်ပါ။
3. အသားပြုတ်မယ့်အိုးထဲကို ဆီထည့်ပြီးအပူပေးပါ။ ဆီပူရင် သစ်ကြံပိုးခေါက်၊ နာနတ်ပွင့်၊ ငရုတ်ကောင်းစေ့ထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။ ပြီးလျှင် နယ်ထားတဲ့အသားများထည့်ပြီးကြော်ပါ။ ( အရောင်တက်လာရန်ဖြစ်ပါတယ်)။ ပြီးလျှင် အသားဖုံးအောင်ရေထည့်ပြီးပြုတ်ပါ။ အဖုံးဖုံးပြီးပြုတ်ပါ။
4. ၁၀-၁၅ မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပြီးလျှင် ကြက်ရင်ပုံသားကို ဆယ်ထားပါ။ ဝက်သားနူးအောင်ဆက်ပြီးပြုတ်ပါ။
5. ၃၅-၄၀ မိနစ်ဆိုရင် ဝက်သားနူးတဲ့အတွက် ဆယ်ထားပါ။
6. အသားပြုတ်ရည်ကို အရိုးပြုတ်ရည်အိုးထဲလောင်းထည့်ပါ။ ဆူအောင်တည်ထားပါ။ ပြီးလျှင် ABC ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ ABC ပဲငံပြာရည်အနောက်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်အဖြူ၊ ဆားထည့်ပါ။
7. ပြီးလျှင် ဟင်းရည်ပျစ်စေရန် ပီလောပီနံမှုန့် (ကော်မူန့်)ကို ရေဖျော်ပြီး ထည့်ပါ။
8. ဟင်းရည်ပျစ်လာအောင် အဆက်မပြတ်မွှေပေးပါ။ (အဆက်မပြတ်မွှေပေးခြင်းက ဟင်းရည်ကိုချောမွှေ့စေပါတယ်)(ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲပျစ်စေရန် ပီလောပီနံမှုန့်က အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပီလောပီနံမှုန့်အစား ပြောင်းဖူးမှုန့်ထည့်နိုင်ပေမယ့် ပြောင်းဖူးမှုန့်ကကော်ရည်အပျစ်ကို ကြာကြာမထိန်းထားနိုင်ပါ ကျဲသွားတတ်ပါတယ်)
9. ပြီးလျှင် ကြက်ဥခေါက်ထည့်ပါ။ ပြုတ်ထားတဲ့ကြက်ဥကို အလုံးလိုက်ထည့်ပြီး ပြုတ်ထားပါ။ (ကြက်ဥ အရောင်ညိုစေရန်ဖြစ်ပါတယ်)
10. ပြီးလျှင် မီးအေးအေးနဲ့တည်ထားပါ။
11. ငါးပိထောင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ ငရုတ်သီးသုံးမျိုးကို ငါးပိကင်နဲ့ရောပြီးထောင်းပါ။ Blender နဲ့ကြိတ်မယ်ဆိုပါက ရေနည်းနည်းထည့်ပြီးကြိတ်ပါ။ ပြီးလျှင် သံပရာရည်ညှစ်ပြီး မွှေထားပါ။
12. ကြက်သွန်ဖြူကို ထောင်းပြီး ဆားထည့်မွှေထားပါ။
13. ကြက်သွန်နီဆီချက်ချက်ထားပါ။ (ကော်ရည်မှာ ကြက်သွန်နီဆီချက်ကအရေးကြီးပါတယ်။ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲကို မွှေစေပါတယ်။ ရယ်ဒီမိတ်ကြက်သွန်နီကြော်သုံးပါက ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲက မမွှေးတော့ပါ)
14. စားသုံးမည်ဆိုပါက ပန်းကန်ထဲကို ခေါက်ဆွဲထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် ဟင်းရည်လောင်းထည့်ပါ။ ရေနွေးဖျော်ထားတဲ့ ကန်စွန်းရွက်နဲ့ပဲပင်ပေါက်ထည့်ပါ။ အသားစုံနဲ့ကြက်ဥပြုတ်ထည့်ပါ။ ကြက်သွန်နီဆီချက်ထည့်ပါ။ ( ကြိုက်နှစ်သက်ပါက နံနံပင်ထည့်နိုင်ပါတယ်)
15. ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲကို ငါးပိထောင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူထောင်း၊ ရှလကာရည်အမည်းနဲ့တွဲပြီးသုံးဆောင်ပါ။ ( မူရင်းကော်ရည်ခေါက်ဆွဲက ရှလကာရည်အမည်းနဲ့ စားပါတယ်)
ကြက်ဆီထမင်းလုံး Hainanese Chicken Rice Balls
ကြက်သား - 1.2 kg
ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်း
ကြက်သွန်မြိတ် - ၄၀ ဂရမ်
ချင်း - ၄၀ ဂရမ်
ထိုင်းjasmine ဆန် - ၄ ခွက် ( ထမင်းပေါင်းအိုးထဲကခွက်)
ချင်း - ၁၅ ဂရမ် (ပါးပါးလှီးပါ)
ကြက်သွန်ဖြူ - ၁ လုံး( 30 ဂရမ်)
ကြက်ဆီ - စားပွဲဇွန်း ၅ ဇွန်း
ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ၁/၂ ဇွန်း
ကြက်သားမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
ပဲငံပြာရည်အနောက် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
ဆွမ်းမွှေးရွက် - ၄ ရွက်
ကြက်ပြုတ်ရည် - ၁ လီတာ ( ၅ ခွက်)
ငရုတ်ဆော့စ် (အချဉ်ရည်) လုပ်ရန်လိုအပ်တာတွေကတော့….Chili Dipping Sauce.
ငရုတ်သီးမှည့်အနီ - ၆၀ ဂရမ်
ငရုတ်သီးမှည့်အနီအသေး - ၃၀ ဂရမ်
ချင်း - ၃၀ ဂရမ်
ကြက်သွန်ဖြူ - ၅ မြှောင့်
သံပရာရည် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
ရှလကာရည် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
ကြက်ပြုတ်ရည် - စားပွဲဇွန်း ၄ ဇွန်း
ချင်းကြက်သွန်မြိတ်ဆော့စ် Ginger & Spring Onion dipping sauce…အတွက်လိုအပ်တာကတော့..
ချင်း - ၂၄ ဂရမ် (နုပ်နုပ်စဉ်း)
ကြက်သွန်ဖြူ - ၃၅ ဂရမ် (နုပ်နုပ်စဉ်း)
ကြက်သွန်မြိတ် - ၆ ပင် (ပါးပါးလှီးထားပါ) ( ၄၀ ဂရမ်)
ဆီ - စားပွဲဇွန်း ၄ ဇွန်း
နှမ်းဆီမွှေး - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
ကြက်ပြုတ်ရည် - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
ပဲငံပြာရည် - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
သကြား - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
နှမ်းဆီမွှေး - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
Garnish အတွက် လိုအပ်တာတွေကတော့….
1. ကြက်ဆီထမင်းအတွက်ဆန်ကို ရေ၃-၄ ကြိမ်ဆေးပြီး ၁ နာရီခန့်ရေစိမ်ထားပါ။ (ဒီလိုရေစိမ်ခြင်းအားဖြင့် ကြက်ဆီထမင်းက ပျော့ပြောင်းပြီး အရသာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်)(ဆန်ရွေးချယ်ရာမှာ ထိုင်း jasmine ဆန်ကို ကို သုံးပေးခြင်းအားဖြင့် ကြက်ဆီထမင်းက အိနေမှာဖြစ်ပြီး မာခြင်းမရှိပါ)
2. ကြက်ကောင်လုံးရဲ့အတွင်းနဲ့အပြင်ကို ဆားဖြင့်ပွတ်ပေးပါ။ (ဒီလိုဆားနဲ့ပွတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ကြက်သားရဲ့အရေခွံကိုချောမွေ့စေပါတယ်)
3. ပြီးလျှင် ချင်းနဲ့ကြက်သွန်မြိတ်ကို ကြက်ရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲကို ထည့်ပါ။ ကြက်ပေါင်ပြုတ်မည်ဆိုပါက ချင်းနဲ့ကြက်သွန်မြိတ်ကို အိုးထဲထည့်ပါ။
4. ကြက်ပြုတ်ရန်ရေနွေးအိုးတည်ထားပါ။ ရေဆူတာနဲ့ ကြက်ကို ရေနွေးအိုးထဲထည့်ပြီး ရေနွေးအိုးထဲကို ကြက်ကိုနှစ်လိုက် ဆွဲပြီးမလိုက် ၃-၄ ကြိမ်ခန့်လုပ်ပါ။ (ဒီလိုအကြိမ်ကြိမ်မတင်ရခြင်းက..ကြက်သားအရေခွံတင်းလာစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့..ကြက်တစ်ကောင်လုံးရဲ့အတွင်းပိုင်က များသောအားဖြင့်အေးနေတယ်။ ဒီလိုမတင်ခြင်းအားဖြင့်.အတွင်းအပြင် အပူချန်မျှတပြီး ကြက်သားအတွင်းပိုင်းနဲ့အပြင်ပိုင်းအကျက်ညီမှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
5. ပြီးလျှင် မိနစ် ၂၀ ခန့်ပြုတ်ပါ။ ပြီးနောက် မီးပိတ် အဖုံးဖုံးပြီး မိနစ် ၅၀ ခန့်ထားပါ။
6. မိနစ် ၅၀ ပြည့်လာပြီဆိုရင် ကြက်ကို ရေနွေးအိုးထဲမှ ဆယ်ယူပြီးရေခဲရေမှာ စိမ်ထားပါ။( ရေခဲရေမှာစိမ်ခြင်းအားဖြင့် ကြက်သားအကျက်မလွန်တော့ဘဲ ကြက်သားကပျော့ပြောင်းပြီး အရေခွံက ချောမွေ့နေပြီး အရသာပိုရှိစေပါတယ်။)
7. ပြီးလျှင် ရေခဲရေထဲမှ ဆယ်ယူပြီးလေသလပ်ခံထားပါ။ ပြီးမှ ကြိုက်နှစ်သက်သလိုခုတ်ပါ။
8. ကြက်ဆီထမင်းချက်ရန်အတွက် ကြက်ဆီကို ဒယ်အိုးထဲထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပြီး ဆီသတ်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ရေစစ်ထားတဲ့ဆန်ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။ ကြက်သားမှုန့်၊ ပဲငံပြာရည်အနောက်၊ ဆားထည့်ပါ။
9. ပြီးလျှင် ချက်မည့်အိုးထဲပြောင်းထည့်ပါ။ ကြက်ပြုတ်ရည်ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် ဆွမ်းမွှေးရွက်ထည့်ပြီး ချက်ပါ။
10. ထမင်းချက်နေစဉ်မှာ ကြက်သားအတွက် ဆော့စ်နဲ့ dipping sauce လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
11. ပထမဦးဆုံး ငရုတ်သီးဆော့စ်အတွက်လိုအပ်တဲ့. ငရုတ်သီးအနီ၊ ဆား၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ချင်း၊ သံပရာရည်၊ ရှလကာရည်၊ ကြက်ပြုတ်ရည်ထည့်ပြီး လျှပ်စစ် blender နဲ့ကြိတ်ပါ။ ပြီးလျှင် ပန်းကန်ထဲပြောင်းထည့်ပြီး နှမ်းဆီမွှေးထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။
12. ချင်းနဲ့ကြက်သွန်မြိတ် dipping sauce လုပ်ရန်အတွက် ဒယ်အိုးအသေးတစ်လုံးကို မီးဖိုပေါ်တင်ပါ။ ပြီးလျှင် ဆီထည့်ပါ။ ဆီပူလျှင် မီးပိတ်ပြီး နုပ်နုပ်စဉ်းထားတဲ့ ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ကြက်သွန်မြိတ်ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။ ပြီးနောက် နှမ်းဆီမွှေးထည့်မွှေပြီး ပန်းကန်လုံးထဲထည့်ပါ။
13. ကြက်သားအတွက် အရသာဆော့စ်လုပ်ရန်အတွက် ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးထဲကို ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ သကြား၊ ကြက်ပြုတ်ရည်၊ နှမ်းဆီမွှေးထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။
14. ကြက်ဆီထမင်းကျက်လာပြီဆိုရင် အပူခံပုံးထဲပြောင်းထည့်ပြီး ပိတ်စဖြင့်ဖုံးပြီး အဖုံးပိတ်ထားပါ။ ( ကြက်ဆီထမင်းကို ထမင်းပေါင်းအိုးထဲဆက်ပြီးထားမယ်ဆိုရင် အပူရှိန်ကြောင့် ကြက်ဆီထမင်းမှာခြောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အပူခံပုံးထဲထည့်ပြီးသိမ်းတဲ့အခါမှာလည်း ပိတ်စဖြင့်ဖုံးရပါ့မယ်။ မဖုံးပါက ကြက်ဆီထမင်းရဲ့အပူရှိန်ကြောင့် အငွေ့ထွက်ပြီး အဖုံးမှတစ်ဆင့် ချွေးများထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့ချွေးကို ပိတ်စကစုတ်ယူထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြက်ဆီထမင်းမှာ ချွေးကျခြင်းကနေကာကွယ်နိုင်ပါတယ်.)
15. ကြက်သားကို ကြိုက်နှစ်သက်သလိုခုတ်ပြီး အဆင်သင့်လုပ်ထားတဲ့ ဆော့စ်လောင်းပါ။
16. ကြက်ဆီထမင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာအရွယ်လုံးပြီး ကြက်သား၊ သခွားသီး၊ dipping sauceနဲ့တွဲဖက်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
• ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ် - ၃ဝဝ ဂရမ်
• ပဲနံ့သာစေ့ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း
• ငရုတ်သီးအခြောက်တောင့် - ၁၀ တောင့်
• ဘိန်းစေ့ - ၄၀ ဂရမ်
• အုန်းသီးမှုန့် - ၅၀ ဂရမ်
• ရေ - အနည်းငယ်
• ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
• သီဟိုဠ်စေ့ - ၁၅ ဂရမ်
• မဆလာ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း
• ကြက်သား - ၄၅၀ ဂရမ်
• ဆီ - အလုံအလောက်
• Curry Powder - လက်ဖက်ဇွန်း ၁ ၁/၂ ဇွန်း
• ဆား - လက်ဖက်ဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း
• သကြား - လက်ဖက်ဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း
• ငရုတ်ကောင်းမှုန့် - လက်ဖက်ဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း
• ပဲငံပြာရည် - လက်ဖက်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ပြောင်းဖူးမှုန့် - လက်ဖက်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
• တန်ပူရာမှုန့် - ၃၀ ဂရမ်
၁။ ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ ဆန် ၂ ဘူးကို တည်ပါ။ ပြီးလျှင် ဒယ်အိုးတစ်လုံးထဲ သစ်ကြံပိုးခေါက်၊ ပဲနံ့သာစေ့၊ ဇီရာ၊ ငရုတ်သီးအခြောက်တောင့်၊ ဘိန်းစေ့နှင့် အုန်းသီးမှုန့်တို့ကို ထည့်ပြီး လှော်ပါ။
၂။ ကြိတ်စက်ထဲ လှော်ထားတာတွေနဲ့ ရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ကြိတ်ပါ။ ဒယ်အိုးတစ်လုံး ထဲ ဆီ ၃ ဇွန်း၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်၊ သီဟိုဠ်စေ့နှင့် ခရမ်းချဉ် သီးအနှစ်တို့ကို ထည့်ပြီး မွှေပါ။ ပြီးလျှင် ကြိတ်ထားတဲ့အနှစ်ထည့်၍ ဆားနှင့် မဆလာ ထည့်ပြီး ဆီပြန်အောင် ချက်ပြီးလျှင် ချက်ထားတဲ့ ထမင်းထဲ ရောပြီး နံနံပင်အုပ်ကာ
၅ မိနစ်ခန့် ပြန်နှပ်ထားလိုက်လျှင် ရပါပြီ။
၃။ ခရမ်းချဉ်သီးထမင်းနဲ့ တွဲစားဖို့အတွက် ကြက်သားကြော်ပါမယ်။ ကြက်သားထဲ Curry Powder, ဆား၊ သကြား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ပဲငံပြာရည်၊ ပြောင်းဖူးမှုန့်နှင့် ကြက်ဥတို့ကို ထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပါ။
၄။ ပြီးလျှင် တန်ပူရာမှုန့်ကို Curry Powder အနည်းငယ်ရော၍ ကြက်သားကို ကပ်ပြီး အပူချိန် ၁၈၀ ဒီဂရီနဲ့ ၁၀ မိနစ်ခန့် ကြော်လိုက်လျှင် ရပါပြီ။
၅။ ခရမ်းချဉ်သီးထမင်းနှင့်အတူ ကြက်သားကြော်ြွကပ်ြွကပ်လေးကလည်း အရမ်း လိုက်ဖက်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 1:58 AM No comments:
အသက် ၅၀ ကျော်သူတိုင်း သတိပြုသင့်သော အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာ
အစာဟောင်းအ်ိမ်သည် အူမကြီး၏နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်ပြီး လူခန္ဓာကိုယ်၏အစာခြေစနစ် ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။ အစာဟောင်းအိမ်သည် ၆ လက်မအရှည်ခန့်ရှိသည်။ တာဝန်မှာ အူမကြီးမှ ဖြတ်သန်းလာသောအစာဟောင်း များ( အီး) ကို ခေတ္တသိုလှောင်ပေးထားပြီး ပြည့်လာသောအခါတွင် စအိုမှတစ်ဆင့်ပြင်ပသို့စွန့်ထုတ်ပေးပါသည်။
အစာဟောင်း၏ တစ်ရှူးများသည် အူမကြီး၏တစ်ရှူးများနှင့် ကွဲပြားခြားနားခြင်းသိပ်မရှိသောကြောင့် အူမကြီးကင်ဆာနှင့် ကင်ဆာအမျိုးအစားနှင့်ဖြစ်ပေါ်ပုံအလားတူသော်လည်း လက္ခဏာများမှာကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အူမကြီး နှင့် အစာဟောင်းအိမ်ဆက်သည့် Junction ဆုံရာတွင် ကင်ဆာအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။
အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာဖြစ်စေသောအကြောင်းများမှာတိတိကျကျပြော၍မရပေ။ အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ဆဲလ်များပျက်စီးခြင်း၊ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းတို့ တွင် ကင်ဆာဆဲလ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းကြခြင်းဖြစ်နိုင်သောကြောင့် အသက် ၅၀ ကျော်သူတိုင်းသည် အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ရန် risk ရှိသူများဖြစ်ပါသည်။ အခြားသောဖြစ်နိုင်သည့်အချက်များမှာ မိသားစုမျိုးရိုးရှိခြင်း၊ အူရောင်ရောဂါများဖြစ်သည့် ulcerative colitis နှင့် Crohn’s disease တုိ့မိမိတွင်ဖြစ်ဖူးခြင်း၊ အစာဟောင်းအိမ်တွင် အူမကြီးတွင်းကဲ့သို့ပင် အသားပိုလုံးများရှိနေခြင်း၊ အခြားသောကင်ဆာရောဂါများရှိခြင်းတုိ့ဖြစ်ပါသည်။
၀မ်းချုပ်သောအခါတွင် အစာဟောင်းများသည် အစာဟောင်းအိမ်နံရံနှင့်ကြာရှည်စွာထိတွေ့ပြီး အဆိုပါဓာတ်များက ကင်ဆာဆဲလ်ပြောင်းလဲစေခြင်း၊ အသားများတွင်ပါဝင်သော oxidant ဓာတ်များကလည်းအစာဟောင်းအိမ်နံရံရှိဆဲလ်များကိုပြောင်လဲစေခြင်းများဟုယူဆရပါသည်။
အစာဟောင်းအိမ်တွင်ဖြစ်နိုင်သောကင်ဆာအမျိုးအစားများမှာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သော်လည်းအဖြစ်အများဆုံး အမျိုး အစားမှာ အူမကြီးကင်ဆာနှင့်အလားတူသော adenocarcinoma အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါကင်ဆာအမျိုးအစားသည် ကာကွယ်၍ရနိုင်သောအချက်တစ်ခုမှာ အများအားဖြင့် အသားပိုလုံး မှတစ်ဆင့်ဖြစ်တတ်သောကြောင့် မှန်ပြောင်းကြည့်ရှုပြီးအသားပိုလုံးတွေ့သည်နှင့်ဖြတ်တောက်ထားခြင်းဖြင့် ကင်ဆာအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကာ ကွယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသက် ၅၀ ကျော်လျှင် အူမကြီးမှန်ေပြာင်းကြည့်ခြင်းအား ဖြင့် အသားပိုများတွေ့ပါက ကြိုတင် ဖြတ်တောက်ပြီး အူမကြီး ကင်ဆာ ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သည် ဖြစ်သည့်အတွက် အူမကြီး မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းသည် အလွန်ပင် အကျိုးကျေးဇူးးများသော စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ဖြစ်ပါသည်။
အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာ၏ လက္ခဏာများကို အဖြစ်အနည်းအများအလိုက်ဖော်ပြပါမည်။
၁။ ၀မ်းသွားရာတွင်သွေးပါခြင်း (၆၀%) - ၀မ်းတွင်းသွေးပါခြင်းသည်အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်သော်လည်း အများစုသည်သတိမထားမိခြင်းကြောင့် လက္ခဏာမပြသလိုဖြစ်နေပြီး ဆရာဝန်မှ စအိုတွင်း လက်ချောင်းထည့် စမ်းသပ်ရာမှ အမှတ်မထင်တွေ့ရှိခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်ပါသည်။
အဆိုပါလက္ခဏာသည် တွေ့ရှိလျှင်လည်း လိပ်ခေါင်းရောဂါ ဟုမိမိဘာသာ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး မှားယွင်းကုသနေတတ်ခြင်းမျိုးလည်းရှိပါသည်။
၂။ ၀မ်းသွားသည့်ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း( ၄၃%) - ၀မ်းလျှောခြင်း၊ ၀မ်းကိုက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ၀မ်းချုပ်ခြင်း ပုံစံမျိုးနှင့် အမျိုးမျိုးလာနိုင်ပြီး ၀မ်းကျန်သလိုခံစားရခြင်းကို ၀မ်းသွားတိုင်းခံစားနေရတတ်ပါသည်။
၃။ Medical checkup တွင် ၀မ်းစစ်ရာမှသွေးပါကြောင်းတွေ့ရှိခြင်း (၂၆%) - ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင်နိုင်ငံတော်မှထောက်ပံ့ပေးသောကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွင် ၀မ်းတွင်းသွေးစစ်ဆေးခြင်း( FIT) ပါဝင်သည်။ လူတိုင်းအသက် ၅၀ ကျော်သည်နှင့် နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးကြရပြီး အဆိုပါစစ်ဆေးမှုမှ စောစီးစွာတွေ့ရှိ ၍ကုသမှုမြန်မြန်ရသောလူများမှာလည်းများပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆိုပါထောက်ပံ့မှုမျိုးမရှိသဖြင့် မိမိဘာသာ medical checkup ပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်မှသာ အူမကြီးနှင့်အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာတို့၏ screening test ဖြစ်သော FIT ကို စစ်ဆေးမိပြီးသိရှိသွားတတ်ပါသည်။
၄။ ဗိုက်နာခြင်း(20%) - ဗိုက်နာခြင်းမှာလည်းဝမ်းကိုက်သကဲ့သို့ ဆွဲဆုပ်နာလိုက် သက်သာလို်က်၊ ဆွဲဆုပ်နာလိုက်၊သက်သာလိုက်ဖြစ်နေပြီး ဗိုက်ကြီးတင်းဖောင်းနေခြင်းလည်းဖြစ်တတ်ပါသည်။
၅။ ခါးနာခြင်း - ကင်ဆာမှာအတော်ကြီးထွား၍ နောက်ဆုံးအဆင့်ပိုင်းသို့ရောက်သွားချိန်တွင် ကင်ဆာကြိတ်မှ ခါးရှိအာရုံကြောများကိုဖိခြင်း၊ ၀င်ရောက်ခြင်းတို့ကြောင့်ခါးနာခြင်းကိုခံစားရပါသည်။
၆။ ဆီးလမ်းကြောင်းလက္ခဏာများဖြစ်သောဆီးပူခြင်း၊ ဆီးကျဉ်ခြင်း - ကင်ဆာနောက်ပိုင်းအဆင့်များတွင် အနီးကပ်တွင်ရှိနေသောဆီးအိမ်နှင့် ဆီးသွားသည့်လမ်းကြောင်းတို့ကို ဖိခြင်းကြောင့် ဆီးလက္ခဏာများခံစားရပါသည်။
၇။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လွယ်ခြင်း( ၉%)
၈။ သွေးအားနည်းခြင်း- ၀မ်းတွင်းသွေးပါခြင်းဖြင့်မသိမသာသွေးများဆုံးရှူံးနေခြင်းကြောင့်သွေးအားနည်းခြင်းနှင့်သွေးအားနည်းခြင်း၏လက္ခဏာများခံစားရခြင်းမှတစ်ဆင့် ကင်ဆာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းများလည်းရှိပါသည်။
၉။ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်း
အစာဟောင်း အိမ် နှင့် အူမကြီးကင်ဆာတို့သည် ကင်ဆာဖြစ်ပုံခြင်း အလားသဏ္ဌာန် တူသော်လည်း ကုသမှုများမှာကွာခြားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် အစာဟောင်းအိမ်တည်ရှိရာနေရာသည် အူမကြီးကဲ့သို့ဝမ်းဗိုက်တွင်းမဟုတ်တော့ဘဲ အူမကြီး အဆုံး စအို အပေါ်နားကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းကြောင်းလေးတွင်းတည်ရှိနေပြီး ကပ်ရပ် တွင် သားအိမ်၊ ဆီးလမ်းကြောင်းတို့နှင့်ကပ်ရပ်တည်ရှိနေသောကြောင့် ကုသမှုမှာပို၍ ခက်ခဲသည့်အပိုင်းများရှိသကဲ့သို့ ကင်ဆာပြန့်နှံ့မှုပုံစံများမှာလည်းကွာခြားပါသည်။
ကင်ဆာပြန့်နှံ့မှုမှာအနီးအနားရှိ တစ်ရှူးများဖြစ်သည့် ဆီးလမ်းကြောင်း၊သားအိမ်လမ်းကြောင်း တို့ဆီတို့ ဦးစွာပြန့်နှံ့ပြီး လမ်းကြောင်းတုဖြစ်ပေါ်ခြင်းများဖြစ်တတ်ပါသည်။ နောက်ဘက်ခါးရိုး သို့လည်း ကင်ဆာဆဲလ်များပြန့်နှံ့လွယ်ပြီး အရိုးကိုက်ခြင်း၊တင်ပဆုံနာခြင်းတို့လည်းဖြစ်တတ်ပါသည်။
ထိုမှတစ်ဆင့် သွေးပြန်ကြောများမှ ကင်ဆာဆဲလ်များ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပြန့်နှံ့ပြီး အသည်းသို့ပြန့်နှံ့ခြင်း၊ အဆုတ်သို့ပြန့်နှံ့ခြင်း၊ ဦးနှောက်သို့ပြန့်နှံ့ခြင်းများသည် အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာ၏နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပြီး ကုသရန်ခက်ခဲသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။
အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာသည်အူမကြီးကင်ဆာနှင့်အမျိုးအစားတူသည့် အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်သော အလုံးအကြိတ်အမျိုးအစားမျိုး၊ နောက်တစ်မျိုးမှာ အနာအမျိုးအစား၊ နောက်တစ်မျိုးမှာအစာဟောင်းအိမ်နံရံ တစ်ပတ်လည် ရှုံ့သွားသောအမျိုးအစားဟူ၍ အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ထို အမျိုးအစားတို့ပေါ်မူတည်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာများမှာကွာခြင်းတတ်ပါသည်။
အလုံးအကြိတ်ခံပြီးအူလမ်းကြောင်းပိတ်၍ ၀မ်းချုပ်ခြင်း၊ အစာဟောင်းအိမ်အနာမှ သွေးများ ထွက်ခြင်းကြောင့် ၀မ်းတွင်းသွေးပါခြင်း၊ ၀မ်းကိုက်သလိုခံစားရခြင်း၊ နံရံတစ်ပတ်လည်လုံး ကင်ဆာဆဲလ်များအလျင်အမြန်ထိုးဖောက်ခြင်းကြောင့် ပြန့်နှံ့သည့်လက္ခဏာများပေါ်မှသိခြင်း စသဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာများမှာအတိအကျထက် ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်လာနိုင်ပါသည်။
အဖြစ်များသော မျိုးရိုးလိုက်တတ်သည့်အစာဟောင်းအိမ် သို့မဟုတ်အူမကြီးကင်ဆာ နှစ်မျိုး ရှိပါသည်။
၁။ အသားပိုအလုံးများဖြင့် ကြိုတင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိသော HNPCC ဟုခေါ်သည့် အူမကြီးကင်ဆာရောဂါနှင့်
၂။ မျိုးနှင့်ရိုးနှင့် အသားပိုလုံးများပါရှိနေသော အူမကြီးကင်ဆာ(FAP)ဟူ၍ အဓိက နှစ်မျိုး ရှိပါသည်။
၁။ အသားပိုအလုံးများဖြင့် ကြိုတင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိသော HNPCC ဟုခေါ်သည့် အူမကြီးကင်ဆာရောဂါ
HNPCC အူမကြီးကင်ဆာသည် အသားပိုလုံးများအဖြစ် အကြိုကင်ဆာလက္ခဏာမတွေ့ရဘဲ ကြိုတင်သိရှိနိင်သော မျိုးရိုးဗီဇအရ အသေအချာပြောနိုင်သော အချက် ၃ ချက်ရှိပါသည်။
၁။ မိသားစုမျိုးရိုးထဲတွင် ဆွေမျိုး သုံးဦးနှင့် အထက် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ဖူးခြင်း ( ထိုဆွေမျိုး ၃ ဦးတွင် မောင်နှမရင်းချာသို့မဟုတ် မိဘ အနည်းဆုံးတစ်ဦးတွင်ဖြစ်ဖူးခြင်း)
၂။ မျိုရိုးစဉ်ဆက် နှစ်ဆက် နှင့် အထက်တွင် ဆက်တိုက်ဖြစ်ဖူးခြင်း
၃။ ဆွေမျိုးတစ်ဦးဦးသည် အသက် ၅၀ အောက်တွင် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ဖူးခြင်း
အထက်ပါ အချက် ၃ချက် အပြင် အချို့သော မိသားစုများတွင် အူမကြီး ကင်ဆာသာမက ဘဲ သားအိမ်ကင်ဆာ၊ သားဥအိမ်ကင်ဆာ၊ ပန်ကရိယကင်ဆာ၊ ကို အသက် ၄၅ နှစ်အောက်တွင်ဖြစ်ဖူးသူများတွင်လည်း HNPCC ရောဂါဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာ သို့မဟုတ် အူမကြီးကင်ဆာ သည်အသက် ၄၅ နှစ်အောက်တွင်ဖြစ်ဖူးသူ မျိုးရိုးတွင်းရှိပါက မိမိတွင်အစာဟောင်းအိမ်နှင့် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ရန်အလားအလာမှာ ၈၀ % ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့မျိုးရိုးထဲတွင်သိသိသာသာ ကင်ဆာရောဂါများဖြစ်ဖူးသူသည် အူမကြီးမှန်ပြောင်းစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ် မျိုးရိုးဗီဇစစ်ဆေးခြင်းကို အသက် ၂၅ နှစ်မှစ၍ သို့မဟုတ်
မိသားစုထဲတွင်ကင်ဆာစတင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည့် အငယ်ဆုံးအသက်မတိုင်ခင် ၁၀ နှစ် အကြို ကတည်းကကြိုတင် စစ်ဆေးထားရန်လိုပါသည်။
ထိုသို့မျိုးရိုးရှိသူသည် အူမကြီးမှန်ပြောင်းကို ၁- ၂ နှစ် တစ်ကြိမ် ပြန်ကြည့်ရန်လိုအပ်ပြီး ကင်ဆာထဖြစ်နိုင်သည့်အချိန်မှာအချိန်မရွေးဖြစ်ပါသည်။
၂။ အသားပိုလုံးများတွေ့ရလေ့ရှိသော အစာဟောင်းအိမ်နှင့် အူမကြီးကင်ဆာ(FAP)
Famalial adenomatous polyposis
မျိုးရိုးဗီဇ ကြောင့် ဖြစ်ပြီး အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်ကတည်းက အသားပိုလုံးများသည် ရာထောင်ချီအောင်ပင် ရှိနေတတ်ပါသည်။ ထိုမျိုးရိုးဗီဇ ပါသူများ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အသက် ၅၀ အရွယ်တွင် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပြီး အလွန်ကင်ဆာအဖြစ်များသောရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မျိုးရိုးထဲတွင် ရှိကြောင်းသိရှိပါက အသက် ၁၄ နှစ်မှစ၍ gene မျိုးရိုးဗီဇ စစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ပြီး gene တွေ့ရှိပါက ကြိုတင်၍ အူမကြီးဖြတ်ခြင်းတို့ပင်ပြုလုပ်ထားရပါသည်။
အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာ သို့မဟုတ် အူမကြီးကင်ဆာစစ်ဆေးမှုအဖြစ် အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ရှုခြင်းသည် gold standard ဟုခေါ်သော အကောင်းဆုံးစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အရံစစ်ဆေးမှုများအနေဖြင့် ၀မ်းတွင်းသွေးပါမပါစစ်ဆေးခြင်းသည် နိုင်ငံတကာတွင် screening test အနေဖြင့် အသက် ၅၀ ကျော်သူတိုင်းကို ပြုလုပ်ပေးသောစစ်ဆေးခြင်းတုိ့ဖြစ်ပါသည်။ အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ရှုခြင်းသည် အစာဟောင်းအိမ်နံရံသာမက အူမကြီးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်နံရံအားလုံးကို ဆရာဝန် မှကင်မရာဖြင့်ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် အလုံးအကြိတ်၊ အနာ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောအသားပိုလုံးများ၊လမ်းကြောင်းများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည့်အပြင် အသားစယူပြီး ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် အကောင်းဆုံးစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကုသမှုအပိုင်းမှာကင်ဆာအမျိုးအစား၊ ကင်ဆာ ၏ ပြန့်နှံ့မှုအဆင့်တို့ပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ အူလမ်းကြောင်းဖြတ်ပြီးပြန်ဆက်ခြင်း၊ အူလမ်းကြောင့်လွှဲပြုလုပ်ပြီး စအို ကို ပိတ်လိုက်ခြင်း၊ ဆေးသွင်းကုသခြင်း ၊ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးကုသခြင်းတို့ဟူ၍ အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။
ရေများများသောက်ခြင်း၊ အသီးအရွက်များများစားခြင်းတို့သည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်သော်လည်း အထိရောက်ဆုံးကာကွယ်နည်းမှာ colorectal cancer screening ဟုခေါ်သော ကြိုတင်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ guideline များတွင်အသက် ၄၅ နှစ်ရောက်သည်နှင့် ရောဂါလက္ခဏာရှိရှိမရှိရှိ၊ မျိုးရိုးအလားအလာရှိရှိမရှိရှိ အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ရှုခြင်းကို ပုံမှန်medical checkup များတွင်ထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့် ရှင်းလင်းအောင် တိတိကျကျပြောရလျှင် ၄၅ နှစ် အထက် မည်သည့်လက္ခဏာမှ မရှိသော လူတိုင်း အူမကြီး မှန်ပြောင်း ကြည့်ရှုပြီး စစ်ဆေးနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာ သံသယ ဖြစ်ဖွယ် လက္ခဏာ တစ်ခုခု ရှိပါက အူမကြီး မှန်ပြောင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း အား မဖြစ်မနေ မပေါ့လျော့ပဲ ပြုလုပ်သင့် ပါသည်။
💢💢💢 gym ကစားခြင်းဆိုသည်မှာ 💢💢💢
💢 gym ကစားကြသူများနှင့် gym အသစ်သစ်များထွက်ပေါ်လာခြင်းမှာ ကျန်းမာရေးအတွက်ဂုဏ်ယူသင့်သည့် trend တစ်ခုဟု ဆိုရပါမည်။ မိမိရွေးချယ်သည့် gym ကိုလိုက်ပြီး ဈေး အနည်းအများ ကြီးသော်လည်း၊ ပြန်ပြီး ရလိုက်သည်မှာ ပိုကောင်းသောကျန်းမာရေးပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း ကုန်ကျစရိတ်ကို သုံးငွေ (expense) ဟုမခေါ်ပဲ ကျန်းမာရေးအတွက်ရင်းနှီးမြုတ်နှံသည့်ငွေ(health investment) ဟု သတ်မှတ်ကြပါသည်။
💢 ယခု post ကို ဖတ်သူအားလုံးနှီးပါး gym ကစားခြင်း ဆိုသည်ကိုရင်းနှီး နားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါမည်ဟု ကျွှန်နော် tom burmese ယူဆပါသည်။ သို့သော် gym ကစားခြင်းဆိုသည်မှာ ကျွှန်တော်တို့ သိထားသကဲ့သို့ လွယ်ကူလွန်းသည့် အရာကားမဟုတ်ပေ။ gym ကစားခြင်းမှာ အဓိကအပိုင်း ၃ ခုရှိပါသည်။ ဘော်ဒီထုဆစ်ရာတွင် ၎င်း ၃ ခုစလုံးကို balance မျှတစွာ လုပ်ပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
1. workout ကစားခြင်း
2. feeding အစာစားခြင်း
3. resting အနားယူုခြင်း
1️⃣ workout အပိုင်းမှာ ကျွှန်တော်အားလုံးသိထားကြပြီး၊ ရင်းနှီးသည့်အပိ်ုင်းလည်းဖြစ်သည်။ ထို့အတူ gym ကစားခြင်း၏ အလွယ်ကူဆုံးအပိုင်းနှင့် အဓိကဖြစ်ဆုံးအပိ်ုင်းဟု ယူဆကြသည်။ သို့သော် workout သည် gym ကစားခြင်း၏ ပထမဦးဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည့် forming ပုံစံဖေါ်ယူသည့် အစပိုင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ workout ပြီးစီးသွားခြင်းသည် gym ကစားခြင်း လုံးဝ ပြီးမြှောက်သွားခြင်း မဟုတ်ဆိုသည်ကို သိထားသင့်ပါသည်။
2️⃣ feeding အပိုင်းမှာ gym ကစားခြင်း၏ အခရာအကျဆုံးအပိုင်းဖြစ်သကဲ့သို့၊ လူတိုင်းအတွက်လိုက်လုပ်ရန် အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အစာစားခြင်းအပိုင်းသည် ဘော်ဒီထုဆစ်နေသူ၊ gym သမားများ၊ ကျွှန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးဆုံး (အလုပ်) တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ အစာစားခြင်းအပိုင်းကို ဖြစ်သလို ကြုံသလိုစားသည့် ကစားသမား မည်သူမဆို ရလာဒ် result ကောင်း ရရှိရန်ခက်ခဲပါမည်။ ထို့ကြောင့် ရလာဒ်ကောင်းရလာစေရန် အစာစားခြင်းအပိုင်းကို စည်းကမ်းတကျ သေသေချာချာ လုပ်ပေးပါ။
3️⃣ resting အပိုင်းကို အရေးမကြီးဟု ကစားသူအများစုက ယူဆကြသည်။ ကြွက်သားထုထည်ကြီးချင်သည့် ကစားသမားများ resting လုံလောက်စွာလိုပါသည်။ သို့ပါမှ အနားပေးသည့်အချိန်တွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကစားထားသည့် မာဆယ်တီလျှူးများ repair ပြန်ပြင်ပေးပြီး၊ မာဆယ်ကြီးထွှာခြင်း growth ရလာပါမည်။ ထို့ကြောင့် ဈေးအပေါဆုံးနှင့် အလွယ်ဆုံး resting အပိုင်းမှ sleeping အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ပေးခြင်းလုပ်ပါ။ resting နှင့် feeding သည် workout ကစားခြင်းမှ recover ကြွက်သားနာကျင်မူပျောက်ကင်းရန် အဓိကဖြစ်ပါသည်။
💢 ဤ ၃ ခုလုံးစလုံးကို သေချာပြီးမြှောက်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို gym ကစားခြင်းဟု ခေါ်ပါသည်။
💌 gym ကစားသူတစ်ယောက်သည် ကျောင်းတက်သည့် ကျောင်းသားတစ်ယောက်နှင့်တူပါသည်။ "ကျောင်းမှန်မှန်တက် စာမခက်" ဆိုသလို " gym” မှန်မှန်သွား မာဆယ်တက်" ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ သင် အဘယ်ကဲ့သို့သော gym ကစားသမားထဲ ပါဝင်ပါလဲ ဆိုတာကြည့်ရအောင်ပါ။
1. gym ကို ပုံမှန်သွားပြီး workout ပုံမှန်လုပ်သည့် ကစား သမားသည် ကျောင်းမပြေးသည့် ကျောင်းသားနှင့်တူပါသည်။ တိုးတက်မူကြီးကြီးမားမား မရှိသော်လည်း မ ကစား သူများနှင့်ယှဉ်လျှင် ပိုကောင်းနေသေးသည်။
2. gym ကိုသွား၊ workout သေချာလုပ်ပြီး feeding အပိုင်းကိုပါ ကြိုစားပြီးလုပ်သူသည် ကျောင်းပုံမှန်တက်ပြီး စားကြိုးစားသည့် ကျောင်းသားနှင့် တူပါသည်။ ထို့ကြောင့်တိုးတက်မူနှင့် ရလာဒ်ကောင်းကို ရောက်ရှိရန် အလားအလာရှိပါသည်။
3. gym ကိုသွား workout သေချာလုပ်၊ feeding အကိုင်းကိုသေချာလုပ်သလို resting အပိုင်းကိုပါ လုပ်နိုင်သူကား ကျောင်းလည်းမှန်၊ စားလည်းကြိုးစားပြီး စည်းကမ်းသေချာလိုက်နာသည့် ကျောင်းသားနှင့်တူပါသည်။ နိုင့်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် နိုင်ငံသားများဖြစ်လာမည့်။
💌 ဒါတွေအားလုံးကို သေချာလိုက်လုပ်နိုင်သည့် ကစားသမားမှာ ဘော်ဒီ ပြောင်းလဲလာခြင်းသိသာပါသည်။ အလားတူ gym ကစားတာကြာနေပြီဖြစ်သော်လည်း ဘော်ဒီ ပြောင်းလဲလာခြင်း မရှိသည့် အကြောင်းရင်းကို သိလောက်ပြီဟု ယူဆပါသည်။
💢 သင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအတွက် အသုံးဝင်ပါက like & share လုပ်ပေးပါနော 💢
🙏 haveahealthy & happy day 🙏
#gym #workout #feeding #resting #recovery #weightloss #fatloss
💢 gym ကစားကြသူများနှင့် gym အသစ်သစ်များထွက်ပေါ်လာခြင်းမှာ ကျန်းမာရေးအတွက်ဂုဏ်ယူသင့်သည့် trend တစ်ခုဟု ဆိုရပါမည်။ မိမိရွေးချယ်သည့် gym ကိုလိုက်ပြီး ဈေး အနည်းအများ ကြီးသော်လည်း၊ ပြန်ပြီး ရလိုက်သည်မှာ ပိုကောင်းသောကျန်းမာရေးပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း ကုန်ကျစရိတ်ကို သုံးငွေ (expense) ဟုမခေါ်ပဲ ကျန်းမာရေးအတွက်ရင်းနှီးမြုတ်နှံသည့်ငွေ(health investment) ဟု သတ်မှတ်ကြပါသည်။
💢 ယခု post ကို ဖတ်သူအားလုံးနှီးပါး gym ကစားခြင်း ဆိုသည်ကိုရင်းနှီး နားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါမည်ဟု ကျွှန်နော် tom burmese ယူဆပါသည်။ သို့သော် gym ကစားခြင်းဆိုသည်မှာ ကျွှန်တော်တို့ သိထားသကဲ့သို့ လွယ်ကူလွန်းသည့် အရာကားမဟုတ်ပေ။ gym ကစားခြင်းမှာ အဓိကအပိုင်း ၃ ခုရှိပါသည်။ ဘော်ဒီထုဆစ်ရာတွင် ၎င်း ၃ ခုစလုံးကို balance မျှတစွာ လုပ်ပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
1️⃣ workout အပိုင်းမှာ ကျွှန်တော်အားလုံးသိထားကြပြီး၊ ရင်းနှီးသည့်အပိ်ုင်းလည်းဖြစ်သည်။ ထို့အတူ gym ကစားခြင်း၏ အလွယ်ကူဆုံးအပိုင်းနှင့် အဓိကဖြစ်ဆုံးအပိ်ုင်းဟု ယူဆကြသည်။ သို့သော် workout သည် gym ကစားခြင်း၏ ပထမဦးဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည့် forming ပုံစံဖေါ်ယူသည့် အစပိုင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ workout ပြီးစီးသွားခြင်းသည် gym ကစားခြင်း လုံးဝ ပြီးမြှောက်သွားခြင်း မဟုတ်ဆိုသည်ကို သိထားသင့်ပါသည်။
2️⃣ feeding အပိုင်းမှာ gym ကစားခြင်း၏ အခရာအကျဆုံးအပိုင်းဖြစ်သကဲ့သို့၊ လူတိုင်းအတွက်လိုက်လုပ်ရန် အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အစာစားခြင်းအပိုင်းသည် ဘော်ဒီထုဆစ်နေသူ၊ gym သမားများ၊ ကျွှန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးဆုံး (အလုပ်) တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ အစာစားခြင်းအပိုင်းကို ဖြစ်သလို ကြုံသလိုစားသည့် ကစားသမား မည်သူမဆို ရလာဒ် result ကောင်း ရရှိရန်ခက်ခဲပါမည်။ ထို့ကြောင့် ရလာဒ်ကောင်းရလာစေရန် အစာစားခြင်းအပိုင်းကို စည်းကမ်းတကျ သေသေချာချာ လုပ်ပေးပါ။
3️⃣ resting အပိုင်းကို အရေးမကြီးဟု ကစားသူအများစုက ယူဆကြသည်။ ကြွက်သားထုထည်ကြီးချင်သည့် ကစားသမားများ resting လုံလောက်စွာလိုပါသည်။ သို့ပါမှ အနားပေးသည့်အချိန်တွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကစားထားသည့် မာဆယ်တီလျှူးများ repair ပြန်ပြင်ပေးပြီး၊ မာဆယ်ကြီးထွှာခြင်း growth ရလာပါမည်။ ထို့ကြောင့် ဈေးအပေါဆုံးနှင့် အလွယ်ဆုံး resting အပိုင်းမှ sleeping အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ပေးခြင်းလုပ်ပါ။ resting နှင့် feeding သည် workout ကစားခြင်းမှ recover ကြွက်သားနာကျင်မူပျောက်ကင်းရန် အဓိကဖြစ်ပါသည်။
💌 gym ကစားသူတစ်ယောက်သည် ကျောင်းတက်သည့် ကျောင်းသားတစ်ယောက်နှင့်တူပါသည်။ "ကျောင်းမှန်မှန်တက် စာမခက်" ဆိုသလို " gym” မှန်မှန်သွား မာဆယ်တက်" ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ သင် အဘယ်ကဲ့သို့သော gym ကစားသမားထဲ ပါဝင်ပါလဲ ဆိုတာကြည့်ရအောင်ပါ။
2. gym ကိုသွား၊ workout သေချာလုပ်ပြီး feeding အပိုင်းကိုပါ ကြိုစားပြီးလုပ်သူသည် ကျောင်းပုံမှန်တက်ပြီး စားကြိုးစားသည့် ကျောင်းသားနှင့် တူပါသည်။ ထို့ကြောင့်တိုးတက်မူနှင့် ရလာဒ်ကောင်းကို ရောက်ရှိရန် အလားအလာရှိပါသည်။
Posted by Alex Aung at 1:22 PM No comments:
ခရေပင်ကို ခယားပင်ဟုလည်း ခေါ်၍ ချယားပင်ဟုလည်း လူသိများသည်။ ခရေပင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တနင်္သာရီတိုင်း နှင့် ဗန်းမော်ခရိုင်တို့၌ အလေ့ကျပေါက်တတ်၍၊ အခြားဒေသ များ၌လည်း စိုက်ပျိုးထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ခရေပင်သည် ပေ ၅ဝ ခန့်အထိ မြင့်နိုင်၍၊ အမြဲစိမ်းအရွက်များ ထူထပ်စွာ ရှိသဖြင့် အရိပ်ကောင်းကို ပေးနိုင်သည်။ ကြီးခဲသောအပင်မျိုး ဖြစ်သော်လည်း ရနံ့သင်းသောအပွင့်များနှင့် အရိပ်ကောင်းရ သည့်အတွက် ဥယျာဉ်ခြံမြေများတွင် စိုက်ပျိုးလေ့ရှိကြသည်။ မျိုးပွားလိုသော် အစေ့ကို စိုက်ပျိုးရလေသည်။
အခေါက်၏အရောင်မှာ အနက်ရောင် မွဲပြာဖြစ်၍ ကြမ်း သည်။ အရွက်များမှာ ၃၊ ၄ လက်မရှည်၍ ချောမွတ်ပြောင် လက်သည်။ ခရေပင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူသိအများဆုံး အထူး သဖြင့် အမျိုးသမီးများ အသိအများ ဆုံးကား လှပ၍ ရနံ့သင်း သော အပွင့်များပင်ဖြစ်လေသည်။ ခရေပွင့်သည် ဖြူ၍ အချင်း ငွေမတ်စေ့ခန့် ရှိသည်။ ကြယ်ပွင့်ကလေးများနှင့် သဏ္ဌာန်တူ၍ နွေဦးပေါက်မှ မိုးကျသည်အထိ ပွင့်ကြသည်။ ကလေးသူငယ် တို့သည် နံနက်အစောကြီးထကာ ခရေပင်အောက်၌ ဖွေးဖွေးဖြူ ကြွေကျနေသော ခရေပွင့်များကို အလုအယက် ကောက်ပြီးသော် တုတ်တံကလေးများဖြင့် သီ၍ ဘုရားတင်လေ့ရှိကြသည်။ အမျိုး သမီးများက ကြိုးဖြင့် သီကုံး၍ ဦးခေါင်း၌ ပန်ဆင်လေ့ရှိကြ သည်။
အသီးများမှာ တစ်လက်မခန့်ရှည်၍ မှည့်လျှင် အရောင်ဝါ လာသည်။ ခရေစေ့များကို ကလေးသူငယ်တို့သည် တွင်းထဲကျ အောင် လက်ဖြင့်တောက်တမ်း ကစားလေ့ရှိကြရာ ခရေစေ့တွင်းကျ ဟူသောစကားမှာ ထိုကစားနည်းမှ စတင်ပေါ်ပေါက်လာကြသည်။
ခရေသား၏အရောင်မှာ နီညစ်ညစ်ဖြစ်၍၊ အသားကျစ်ခြင်း၊ မာကျောခြင်း၊ ခိုင်ခံ့ခြင်း၊ ကြာရှည်ခံခြင်း၊ ပြောင်လက်လာ အောင် အရောင်တင်နိုင်ခြင်းများကြောင့် ယင်းအသားဖြင့် အဆောက်အုံ၊ ဘီရို၊ တံတား၊ လှည်း၊ လှေနှင့် ဆန်ထောင်း ကျည်ပွေ့များ ပြုလုပ်ကြသည်။
ခရေပင်၏ ဆေးဖက်ဝင်သော အကျိုးကား အသီးနှင့် အခေါက်တို့၌ ချုပ်စေတတ်သည့် သတ္တိရှိသည်။ အစေ့များကို ရေ၌နူးအောင် စိမ်ပြီးနောက် ကျိုချက်လျှင်လည်း အကြော အဆစ် ရောင်နာများတွင် လိမ်းရသော ဆီတစ်မျိုး ရနိုင်သည် ဟု ဆိုလေသည်။ 
Star-Flower (ခရေပင် (ချရားပင်)
ပုံသဏ္ဌာန် : အပင် -ပင်စည်ဖြောင့်မတ်သော အပင်ကြီးမျိုးဖြစ်၍ ပေ ၄၀ခန့်မြင့်၏။ အဖို အမ နှစ်မျိုးရှိသည်။ အသီးအပွင့် နှစ်မျိုးရှိသော် အမမျိုးဖြစ်၍ အပွင့်သက်သက်ပွင့်လျှင် အဖိုမျိုးဖြစ်သည်။ အကိုင်းအခက် လွန်စွာဖြာ၏။ အခေါက်ထူ၍ ကြမ်းပြီး ညိုမည်းရောင်ရှိ၏။ အရွက် - ပြောင်ချော၍ တောက်ပသည်။ ဘဲဥပုံရှိ၍ ရွက်ထိပ်ချွန်ပြီး ရွက်ရင်းဝိုင်း၊ သို့မဟုတ် အနည်းငယ် သွယ်သည်။ရွက်နားလှိုင်းတွန့်သည်။သပြေရွက်နှင့် တူ၏။ အပွင့် - အဖိုပွင့် အမပွင့် ၂ မျိုးရှိ၍ အမပွင့်ထက် အဖိုပွင့်သည် အနည်းငယ်ကြီးပြီးဖြူ၏။ အမပွင့်သည် အနည်းငယ် နီကြန်ကြန်ရှိ၏။ အပွင့်များမှာ မွှေးကြိုင်သောရနံ့ရှိသည်။ကဆုန်၊ နယုန် လတွင်ပွင့်သည်။ အသီး - ဘဲဥပုံ ရှိ၏။ ပထမတွင် အစိမ်းရောင်ရှိပြီး နောက်ပိုင်း ရင့်မှည့်သောအခါ လိမ္မော်နီရောင် ဖြစ်သွားသည်။ အသားထူ၏။ အသားအဝါရောင် ရှိပြီး ဖန်၍ ချိုသည်။ စား၍ရသည်။ အစေ့မှာ မာကျော ပြီး အညိရင့်ရောင်ရှိသည်။ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်းလတွင် သီးသည်။ အသုံးပြုနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ : အပွင့် ၊ အခေါက် ၊ အစေ့။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့နိုင်သောနေရာများ : မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း မြေပြန့်ဒေသ များတွင် အများအပြားတွေ့ရသည်။သဘာဝအလျောက် ပေါက်ရောက်သည်။ အသုံးဝင်ပုံ : အာနိသင် -မြန်မာ့ဆေးကျမ်းများအလိုအရ အခေါက်သည်ချို၏။ ခါး၏။ အေး၏။ နှလုံးကို အားရှိစေ၏။ ဝမ်းမီးကိုပွားစေ၏။ ရောဂါပိုးတို့ကို နိုင်၏။ သွားဖုံးရောဂါများ၌ အကျိုးပြု၏။ သည်းခြေဖောက်ပြန်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အသီးသည် အူကို တွန့်ရှုံ့စေ၏။ နှုတ်ကိုမြိန်စေ၏။ သွားတို့ကို ခိုင်စေ၏။ ချုပ်၏။ သလိပ် သည်းခြေကိုနိုင်၏။ အစေ့သည် လှုပ်နေသော သွားတို့ကို ခိုင်စေ၏။ ရှူသော် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။
အသုံးပြုပုံ- အပွင့် ၁။ခရေပွင့်ကို တစ်ညလုံးရေစိမ်၍ နံနက်တွင်ထို စိမ်ရည်ကိုစစ်ပြီး ကလေးအားတိုက်လျှင်ချောင်းဆိုးရောဂါပျောက်၏။ ၂။ခရေပွင့်အစိုကို မီးယပ်ဖြူရောဂါနှင့် သွားရောဂါ အတွက် အသုံးပြု၏။ ၃။ခရေပွင့်အခြောက်ကို သနပ်ခါးဖြင့် ရောသွေးလိမ်းက အပူကြောင့်ဖြစ်သောမိတ်နာ၊ ယားနာများ အမြန်ပျောက်ကင်း၏။ အခေါက် ၁။အခေါက်ပြုတ်ရည်ကို သောက်ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ အပွင့်ကိုရှူခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အသီးကိုစားခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း နှလုံးရောဂါကို ပျောက်စေ၏။ ၂။ခရေခေါက်၊ဆီးဖြူခေါက်၊ရှားခေါက် ၃ မျိုးပြုတ်၍ငုံပေးခြင်းဖြင့် ပါးစပ်၌ မက်ခရုပေါက်ခြင်း၊ သွားဖုံး ရောင်ခြင်း၊ ပါးစပ်၌အပူလောင်ခြင်း၊ ရေစီးကမ်းပြို ဖြစ်ခြင်းစသော ခံတွင်းနာအားလုံး ပျောက်ကင်း စေသည်။ ၃။အခေါက်ကိုပြုတ်၍ ဖန်ဆေးရည်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အစေ့ ၁။အဆက်မပြတ်သွားသော ဝမ်းရောဂါအတွက် အစေ့ကို ရေအေးနှင့် သွေးသောက်ခြင်း၊ ခရေသီးအမှည့်၏ အသားကိုစားပေးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်း စေနိုင်သည်။
ခရေပင်ကို ခယားပင်ဟုလည်း ခေါ်၍ ချယားပင်ဟုလည်း လူသိများသည်။ ခရေပင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တနင်္သာရီတိုင်း နှင့် ဗန်းမော်ခရိုင်တို့၌ အလေ့ကျပေါက်တတ်၍၊ အခြားဒေသ များ၌လည်း စိုက်ပျိုးထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ခရေပင်သည် ပေ ၅ဝ ခန့်အထိ မြင့်နိုင်၍၊ အမြဲစိမ်းအရွက်များ ထူထပ်စွာ ရှိသဖြင့် အရိပ်ကောင်းကို ပေးနိုင်သည်။ ကြီးခဲသောအပင်မျိုး ဖြစ်သော်လည်း ရနံ့သင်းသောအပွင့်များနှင့် အရိပ်ကောင်းရ သည့်အတွက် ဥယျာဉ်ခြံမြေများတွင် စိုက်ပျိုးလေ့ရှိကြသည်။ မျိုးပွားလိုသော် အစေ့ကို စိုက်ပျိုးရလေသည်။
အခေါက်၏အရောင်မှာ အနက်ရောင် မွဲပြာဖြစ်၍ ကြမ်း သည်။ အရွက်များမှာ ၃၊ ၄ လက်မရှည်၍ ချောမွတ်ပြောင် လက်သည်။ ခရေပင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူသိအများဆုံး အထူး သဖြင့် အမျိုးသမီးများ အသိအများ ဆုံးကား လှပ၍ ရနံ့သင်း သော အပွင့်များပင်ဖြစ်လေသည်။ ခရေပွင့်သည် ဖြူ၍ အချင်း ငွေမတ်စေ့ခန့် ရှိသည်။ ကြယ်ပွင့်ကလေးများနှင့် သဏ္ဌာန်တူ၍ နွေဦးပေါက်မှ မိုးကျသည်အထိ ပွင့်ကြသည်။ ကလေးသူငယ် တို့သည် နံနက်အစောကြီးထကာ ခရေပင်အောက်၌ ဖွေးဖွေးဖြူ ကြွေကျနေသော ခရေပွင့်များကို အလုအယက် ကောက်ပြီးသော် တုတ်တံကလေးများဖြင့် သီ၍ ဘုရားတင်လေ့ရှိကြသည်။ အမျိုး သမီးများက ကြိုးဖြင့် သီကုံး၍ ဦးခေါင်း၌ ပန်ဆင်လေ့ရှိကြ သည်။
အသီးများမှာ တစ်လက်မခန့်ရှည်၍ မှည့်လျှင် အရောင်ဝါ လာသည်။ ခရေစေ့များကို ကလေးသူငယ်တို့သည် တွင်းထဲကျ အောင် လက်ဖြင့်တောက်တမ်း ကစားလေ့ရှိကြရာ ခရေစေ့တွင်းကျ ဟူသောစကားမှာ ထိုကစားနည်းမှ စတင်ပေါ်ပေါက်လာကြသည်။
ခရေပင်၏ ဆေးဖက်ဝင်သော အကျိုးကား အသီးနှင့် အခေါက်တို့၌ ချုပ်စေတတ်သည့် သတ္တိရှိသည်။ အစေ့များကို ရေ၌နူးအောင် စိမ်ပြီးနောက် ကျိုချက်လျှင်လည်း အကြော အဆစ် ရောင်နာများတွင် လိမ်းရသော ဆီတစ်မျိုး ရနိုင်သည် ဟု ဆိုလေသည်။ 
ပုံသဏ္ဌာန် : အပင် -ပင်စည်ဖြောင့်မတ်သော အပင်ကြီးမျိုးဖြစ်၍ ပေ ၄၀ခန့်မြင့်၏။ အဖို အမ နှစ်မျိုးရှိသည်။ အသီးအပွင့် နှစ်မျိုးရှိသော် အမမျိုးဖြစ်၍ အပွင့်သက်သက်ပွင့်လျှင် အဖိုမျိုးဖြစ်သည်။ အကိုင်းအခက် လွန်စွာဖြာ၏။ အခေါက်ထူ၍ ကြမ်းပြီး ညိုမည်းရောင်ရှိ၏။ အရွက် - ပြောင်ချော၍ တောက်ပသည်။ ဘဲဥပုံရှိ၍ ရွက်ထိပ်ချွန်ပြီး ရွက်ရင်းဝိုင်း၊ သို့မဟုတ် အနည်းငယ် သွယ်သည်။ရွက်နားလှိုင်းတွန့်သည်။သပြေရွက်နှင့် တူ၏။ အပွင့် - အဖိုပွင့် အမပွင့် ၂ မျိုးရှိ၍ အမပွင့်ထက် အဖိုပွင့်သည် အနည်းငယ်ကြီးပြီးဖြူ၏။ အမပွင့်သည် အနည်းငယ် နီကြန်ကြန်ရှိ၏။ အပွင့်များမှာ မွှေးကြိုင်သောရနံ့ရှိသည်။ကဆုန်၊ နယုန် လတွင်ပွင့်သည်။ အသီး - ဘဲဥပုံ ရှိ၏။ ပထမတွင် အစိမ်းရောင်ရှိပြီး နောက်ပိုင်း ရင့်မှည့်သောအခါ လိမ္မော်နီရောင် ဖြစ်သွားသည်။ အသားထူ၏။ အသားအဝါရောင် ရှိပြီး ဖန်၍ ချိုသည်။ စား၍ရသည်။ အစေ့မှာ မာကျော ပြီး အညိရင့်ရောင်ရှိသည်။ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်းလတွင် သီးသည်။ အသုံးပြုနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ : အပွင့် ၊ အခေါက် ၊ အစေ့။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့နိုင်သောနေရာများ : မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း မြေပြန့်ဒေသ များတွင် အများအပြားတွေ့ရသည်။သဘာဝအလျောက် ပေါက်ရောက်သည်။ အသုံးဝင်ပုံ : အာနိသင် -မြန်မာ့ဆေးကျမ်းများအလိုအရ အခေါက်သည်ချို၏။ ခါး၏။ အေး၏။ နှလုံးကို အားရှိစေ၏။ ဝမ်းမီးကိုပွားစေ၏။ ရောဂါပိုးတို့ကို နိုင်၏။ သွားဖုံးရောဂါများ၌ အကျိုးပြု၏။ သည်းခြေဖောက်ပြန်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အသီးသည် အူကို တွန့်ရှုံ့စေ၏။ နှုတ်ကိုမြိန်စေ၏။ သွားတို့ကို ခိုင်စေ၏။ ချုပ်၏။ သလိပ် သည်းခြေကိုနိုင်၏။ အစေ့သည် လှုပ်နေသော သွားတို့ကို ခိုင်စေ၏။ ရှူသော် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။
အသုံးပြုပုံ- အပွင့် ၁။ခရေပွင့်ကို တစ်ညလုံးရေစိမ်၍ နံနက်တွင်ထို စိမ်ရည်ကိုစစ်ပြီး ကလေးအားတိုက်လျှင်ချောင်းဆိုးရောဂါပျောက်၏။ ၂။ခရေပွင့်အစိုကို မီးယပ်ဖြူရောဂါနှင့် သွားရောဂါ အတွက် အသုံးပြု၏။ ၃။ခရေပွင့်အခြောက်ကို သနပ်ခါးဖြင့် ရောသွေးလိမ်းက အပူကြောင့်ဖြစ်သောမိတ်နာ၊ ယားနာများ အမြန်ပျောက်ကင်း၏။ အခေါက် ၁။အခေါက်ပြုတ်ရည်ကို သောက်ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ အပွင့်ကိုရှူခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အသီးကိုစားခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း နှလုံးရောဂါကို ပျောက်စေ၏။ ၂။ခရေခေါက်၊ဆီးဖြူခေါက်၊ရှားခေါက် ၃ မျိုးပြုတ်၍ငုံပေးခြင်းဖြင့် ပါးစပ်၌ မက်ခရုပေါက်ခြင်း၊ သွားဖုံး ရောင်ခြင်း၊ ပါးစပ်၌အပူလောင်ခြင်း၊ ရေစီးကမ်းပြို ဖြစ်ခြင်းစသော ခံတွင်းနာအားလုံး ပျောက်ကင်း စေသည်။ ၃။အခေါက်ကိုပြုတ်၍ ဖန်ဆေးရည်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အစေ့ ၁။အဆက်မပြတ်သွားသော ဝမ်းရောဂါအတွက် အစေ့ကို ရေအေးနှင့် သွေးသောက်ခြင်း၊ ခရေသီးအမှည့်၏ အသားကိုစားပေးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်း စေနိုင်သည်။
(Tin Maung Hlaing)
Posted by Alex Aung at 9:08 AM No comments:
Labels: Agriculture Techniques
ချဉ်စပ်အရသာကြက်ကြော် _ ဒံပေါက်
ဒီကြက်ကြော်နည်းလေးက မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြော်လို့ရပြီး ချဉ်စပ်အရသာလေးမို့ ထမင်းချိုင့် ထည့်ယူရာမှာ အဆင်ပြေပြီး စားလို့မြိန်စေတဲ့ ဟင်းလျာတစ်မည်ပါ။
• ကြက်ပေါင်လုံး - ၁၅ ကျပ်သား
• မန်ကျည်းမှည့်ရည် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ငရုတ်ခွဲခြမ်း - စားပွဲဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း
• ချင်း - လက်တစ်ဆစ်
• ကြက်သွန်ဖြူဥသေး - ၁ လုံး
ဦးစွာ ကြက်ပေါင်လုံးလေးတွေကို ရေမဆေးခင် ဆားအနည်းငယ်နဲ့ နယ်ပြီးမှ ရေဆေးပါ။ အဲဒါဆိုအနံ့အသက်လည်းကင်းပြီး အသားရောင်လည်း ပိုမိုကြည်လင်လှပပါတယ်။ မည်သည့် အသားကိုမဆို အဲဒီနည်းနဲ့ဆေးကြောသန့်စင်နိုင်ပါတယ်။ ရေဆေးပြီးတဲ့ ကြက်ပေါင်ကို နနွင်းမှုန့်၊ ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်နှင့် နယ်ပြီးြွကပ်ရွလာအောင် မီးအေးအေးနှင့် ကြော်ပါ။ ကြက်ကြော်ကို ဆယ်ယူပြီး ဆီများနေလျှင် အနည်းငယ် ခပ်ထုတ်ထားပါ။ မန်ကျည်းမှည့်ရည်၊ သကြားနှင့် ဆားတို့ကို ဖျော်ထားပါ။ ချင်းနှင့် ကြက်သွန်ဖြူကို ရောထောင်းပြီး ကျန်ဆီထဲ ထည့် ကြော်ပါ။ြွကပ်ရွမွှေးလာလျှင် မဆလာထည့်ပါ။ ဖျော်ထားသော မန်ကျည်းမှည့်ရည် ထည့်ပါ။ အနှစ်ခြောက်ခြောက်ဖြစ်လာလျှင် ငရုတ်ခွဲခြမ်းထည့်၍ ကြော်ထားသော ကြက်သားထည့်ပြီး ကြက်ကြော်နှင့် အနှစ်များ တစ်သားတည်းဖြစ်သွားလျှင် ရပါပြီ။
ဒံပေါက်ချက်နည်းလေးကို အဆင်ပြေပြေ ချက်နိုင်အောင်လို့ ပန်းခရေက မျှဝေရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။
• သစ်ကြံပိုးခေါက် - အနည်းငယ်
• နာနတ်ပွင့် - ၁ ပွင့်
• ဇီရာစေ့ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်း
• လေးညှင်းပွင့် - ၄ ပွင့်
• ဖာလာစေ့ - ၂ စေ့
• စမုန်စပါး - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း
အထက်ဖော်ပြပါ အမွှေးအရွက်နှင့် အစေ့အဆန်တို့ကို မီးအေးအေးဖြင့် လှော်ပြီး ကြေညက်အောင် ထောင်းပါ။
• မဆလာ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ဂီးထောပတ် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ဒိန်ချဉ် - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
• ကြက်သွန်ကြော် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
• အရသာမှုန့် - အနည်းငယ်
ဇလုံတစ်လုံးထဲ ကြက်သား၊ ထောင်းထားသော ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်၊ ထောင်းထားသော မဆလာ၊ ဂီးထောပတ်၊ ဒိန်ချဉ်၊ ကြက်သွန်ကြော်၊ ဆား၊ သကြားနှင့် အရသာမှုန့်တို့ကို ထည့်၍ နှံ့စပ်အောင်နယ်ပြီး ၃ နာရီခန့် နှပ်ထားပါ။
• ကုံကုမံ (အရောင်အမှုန့်) - အနည်းငယ်
• နို့စိမ်း - စားပွဲဇွန်း ၈ ဇွန်း
• ကြက်သွန်ကြော် - ၃၀ ဂရမ်
• သကြား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၅ ဇွန်း
• အရသာမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ဇီရာစေ့ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ဆန် - ၄ ဘူး
• ဂီးထောပတ် - ၃၀ ဂရမ်
• ငှက်ပျောရွက် - အနည်းငယ်
• ပူဒီနာရွက် - ၁ စည်း
• သီဟိုဠ်စေ့ - ၂၀ ဂရမ်
• စပျစ်ခြောက် - ၂၀ ဂရမ်
• ဒိန်ချဉ် - ၂၀ ဂရမ်
• ဂျုံမှုန့် - ၃၀ ဂရမ်
၁။ ဦးစွာ ခွက်ထဲ နို့စိမ်းနှင့် ကုံကုမံ အနည်းငယ်ထည့်ပြီး သမအောင်မွှေထားပါ။
၂။ ဇလုံတစ်လုံးထဲ ကြက်သွန်ကြော်၊ ထောင်းထားသော မဆလာ ၂ ဇွန်း၊ အရသာမှုန့် အနည်းငယ်၊ သကြား အနည်းငယ်နှင့် ဆား အနည်းငယ်တို့ကို ထည့်ပြီး သမအောင် နယ်ထားပါ။
၃။ အိုးကြီးကြီးတစ်လုံးထဲ ရေ ၃ လီတာခန့် ထည့်ပြီး ဆား ၄ ဇွန်း၊ သကြား ၄ ဇွန်း၊ အရသာမှုန့် ၂ ဇွန်း၊ လေးညှင်းပွင့် ၄ ပွင့်၊ ကရဝေးရွက် ၁ ရွက်၊ ဇီရာစေ့ ၁ ဇွန်း၊ သစ်ကြံပိုးခေါက် အနည်းငယ်၊ ဖာလာစေ့ ၂ စေ့နှင့် ဆန် ၄ ဘူးတို့ကို ထည့်ပြီး ဆူအောင် တည်ပါ။ ရေဆူလာပြီး ဆန်သား သုံးပုံနှစ်ပုံခန့် ကျက်သည်အထိတည်ပါ။ ဆန်ခါထဲ ဆန်များ သွန်ချပြီး ရေစစ်ထားပါ။ အငွေ့များ လွင့်မထွက်သွားအောင် အဖုံးတစ်ခုဖြင့် အုပ်ထားပါ။
၄။ ဒံပေါက်ချက်မည့်အိုးကို ထောပတ်သုတ်ပြီး ငှက်ပျောရွက်ခင်းပါ။ ပြုတ်ထားသော ထမင်း အနည်းငယ် ထည့်ပါ။ နှပ်ထားသော ကြက်သားများကို ထမင်းအပေါ်မှာ ထပ်ထည့်ပါ။ ထမင်း ထပ်ထည့်ပြီး အပေါ်မှာ နယ်ထားသော ကြက်သွန်ကြော်များကို ဖြူးပါ။ ဖျော်ထားသော ကုံကုမံအရည်ကို အပေါ်မှာ ဆမ်းပါ။ ဂီးထောပတ်၊ သီဟိုဠ်စေ့၊ စပျစ်ခြောက်၊ ဒိန်ချဉ်နှင့် ပူဒီနာရွက်တို့ကို ထမင်းအပေါ်မှာ ထပ်ဖြူးပါ။ ပြီးလျှင် အပေါ်မှာ ထမင်းထပ်ထည့်ပြီး အဆာ ပလာများအပေါ်မှာ ထပ်ဖြူးပါ။ ထမင်း၊ ကြက်သား၊ အဆာပလာများကို နှစ်ထပ်ခန့် ထည့်
ပြီးလျှင် အငွေ့ လုံစေရန်အတွက် ဂျုံမှုန့်ကို ရေဖြင့်နယ်ပြီး အိုးအနားပတ်ပတ်လည်မှာ ကပ်၍ အဖုံးဖုံးပြီး မီးဖိုပေါ်မှာ စချက်လို့ရပါပြီ။ ဒံပေါက်ထမင်းအိုးကို မီးပြင်းပြင်းဖြင့် ၁၅ မိနစ်၊
မီးအလယ်အလတ်ဖြင့် ၁၅ မိနစ်၊ မီးအေးအေးဖြင့် ၁၅ မိနစ်ခန့် နှပ်ပြီးလျှင် သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Alex Aung at 10:11 PM No comments:
Credit to စွန့် ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်
Labels: စီးပွားရေး, စီမံခန့်ခွဲရေး, ဗဟုသုတ
SD Card တွေကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်လဲ?
SD (Secure Digital) cards တွေကို Digital Cameras , Music Players , Smartphones, Tablets နဲ့ Laptops တွေမှာအသုံးပြုကြတာကို လူတိုင်းသိကြမှာပါ။
ဒါပေမယ့် SD Card တွေက အကုန်အတူတူထုတ်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ Speed Class , အရွယ်အစားနဲ့ Storage Capacities ကိုလိုက်ပြီး ကွဲပြားတာကြောင့် ကိုယ့်နဲ့သင့်တော်မယ့် SD Card ကိုရွေးချယ်ဖို့ စဉ်းစားရပါမယ်။
SD Card တွေအားလုံးမှာ တူညီတဲ့အမြန်နှုန်းမရှိကြပါဘူး။
အကယ်၍ သင်ဟာ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ဆိုရင် ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ High Resolution Raw Format နဲ့ပဲသိမ်းထားချင်တဲ့အတွက် မြန်တဲ့ SD Card သုံးဖို့လိုပါတယ်။
Video Recording တွေအတွက်ဆိုလည်း မြန်တဲ့ SD Card ကအရေးပါပါတယ်။bစမတ်ဖုန်းထဲမှာ သာမာန်ဓာတ်ပုံရိုက်တာတွေ နဲ့ Files တွေသိမ်းဆည်းထားချင်ရင်တော့ ရိုးရိုး SD Card ကိုသုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်။
အဲ့တာကို Speed Class နဲ့ခွဲပြီးတော့ Speed Class အမျိုးအစား ၄ မျိုးရှိပါတယ် ။ 10(10MB/s), 6(6MB/s), 4(4MB/s), 2(2MB/s) ဆိုပြီး SD Card ရဲ့ညာဘက် C ပုံစံထဲမှာ ထည့်သွင်းရေးထားပါတယ်။
SD Card ထဲမှာ အမြန်ဆုံးဖြစ်ပြီး Full HD Video တွေ Record လုပ်မယ်ဆို Class 10 ကအသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။
Class6နဲ့ Class4ကတော့ HD Video Recording လောက်ပဲအဆင်ပြေမှာပါ။
Class2ကတော့ အနှေးဆုံးဖြစ်ပြီး SD Video Recording အတွက်ပဲအဆင်ပြေမှာပါ။
Ultra High Speed ( UHS) မှာတော့ Class I, U1(10MB/s) နဲ့ II, U3(30MB/s) ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ UHS ကိုတော့ Digital Cameras တွေမှာအသုံးများပါတယ်။
အကြောင်းက အခုနောက်ပိုင်းမှာ 4K Videos တွေကိုမြန်မြန်ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့သုံးလာကြတာကြောင့် အပြင် 8K Video ကလည်း မကြာခင်မှာ ရလာနိုင်တော့မှာမလို့ UHS ကဒ်က လိုကိုလိုလာမှာပါ ။
Read Speed (သင့် Device ထဲကတစ်ခုခုကိုဖွင့်ရန်ကြာချိန်နှုန်းကိုပြခြင်း)
Write Speed (Data Transfer) (သင့် Device ထဲကတစ်ခုခုကိုသိမ်းရန်ကြာချိန်နှုန်းကိုပြခြင်း)
ဥပမာ 32MB/s Write Speed ရှိတယ်ဆိုရင် စက္ကန့်တိုင်းမှာ 32MB ထိ Record လုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။
Smartphones နဲ့ Tablet တွေအတွက် 10,6နဲ့4တင်လုံလောက်ပါတယ်။ Class2တွေအနေနဲ့ကတော့ အရမ်းနှေးတဲ့အတွက် မဝယ်သင့်တော့တဲ့ထဲမှာ ပါနေပါပြီ။ Speed Class တွေကို SD Card အပေါ်မှာရေးပြထားတော့ ရွေးရမခက်ပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်း SD Card တွေက Class 10 ကို UHS 1နဲ့ တွဲပြီးထုတ်လာတာများတော့ ဈေးကွက်ထဲမှာ Class 10 တွေပဲရှိမှာပါ ။
Smartphones နဲ့ Tablets တွေအတွက်သာမက Digital Cameras အတွက်ပါ အသင့်တော်ဆုံး SD Card (microSD) list ကိုအောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
(1) Samsung PRO Endurance
Capacity: Up to 128GB | Read Speed: Up to 100MB/s | Write Speed: Up to 30MB/s
(2) Samsung EVO Plus
Capacity: Up to 256GB | Read Speed: Up to 100MB/s | Write Speed: Up to 30MB/s
(3) SanDisk Extreme Plus
Capacity: Up to 128GB | Read Speed: Up to 95MB/s | Write Speed: Up to 90MB/s
(4) SanDisk Ultra
Capacity: Up to 400GB | Read Speed: Up to 80MB/s | Write Speed: Up to 10MB/s
Capacity: Up to 128GB | Read Speed: Up to 40MB/s | Write Speed: Up to 10MB/s
အရွယ်အစားမှာ Standard SD ( လက်မဝက်အရွယ်), mini SD ( Standard SD ထက်အနည်းငယ်သေး) , microSD နဲ့ Huawei ကမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Nano SD (microSD ထက် 40% သေးတဲ့အရွယ်) ဆိုပြီးရှိပါတယ်။Standard SD တွေကို Digital Cameras တွေမှာသာအသုံးများပါတယ်။ miniSD ကို တစ်ချို့သော Mobile Phones တွေမှာအသုံးပြုကြပေမယ့်အခုနောက်ပိုင်းတော့မရှိသလောက်ရှားသွားပါတယ်။
micro SD ကတော့အခု Smartphones နဲ့ Tablets တွေမှာအသုံးများပါတယ်။ Nano SD ကတော့ Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X, Huawei P30 နဲ့ Huawei P30 Pro မှာသာထည့်သွင်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။
သင်ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် သင့်ဖုန်း ဒါမှမဟုတ် တခြား Devices တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အရွယ်အစားကိုပဲရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Adapter တွေလဲဝယ်လို့ရနေတာမလို့ MicroSD ကနေ Standard SD ကိုလွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
SD Standard Capacity (SDSC) - 1MB to 2GB
SD High Capacity (SDHC) - 2GB to 32GB
SD Extended Capacity ( SXHC) - 32GB to 2TB စသဖြင့်ရှိပါတယ်။
SDHC နဲ့ SXHC ကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Device က SD ဘယ်လောက်ထိစိုက်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါမယ်။
လက်ရှိမှာ အသုံးပြုများနေတာကတော့ SDHC တွေဖြစ်ပြီး ခုနောက်ပိုင်းမှာ SXHC တွေကိုလည်း တော်တော်သုံးလာကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီတော့ SD Card ဝယ်ယူတော့မယ်ဆိုတိုင်း ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Class အမျိုးအစား, ကိုယ့်ဖုန်း (or) Device မှာ သုံးရမယ့် Size နဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Capacity ကို သေချာရွေးပြီးဝယ်ယူနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပြောပြခဲ့တဲ့အချက်တွေကို ကြည့်ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံး SD Card ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြပါစေဗျ။
#Anycall_Mobile #Knowledge #SDCard
Labels: Products Review, နည်းပညာ
~ ကံကိုပြင်လိုက်ပါ ~
သီဟိုဠ်ရာဇ၀င်မှာ ၀သဘမင်းဆိုတာ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ မင်းမဖြစ်ခင် သာမန်လူတစ်ယောက် ဘ၀တုန်းက ဦးရီးတော် စစ်သူကြီးဆီမှာ နေ,နေရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ ဟူးရားပညာရှိတွေက ၀သဘအမည်ရှိတဲ့ သူဟာမင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဟောပြောလာကြပါတယ်။ ဒီစကားကြားရတော့ လက်ရှိ မင်းလုပ်နေတဲ့ ယသဠာလကမင်းက သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာ ၀သဘအမည်ရှိတဲ့သူအားလုံးကို သတ်စေလို့ မိန့်ပါတယ်။ ဒီတော့ စစ်သူကြီးက သူ့ဆီမှာနေတဲ့ ၀သဘကို မင်းဆီအပ်ဖို့ မယားလုပ်သူကို ပြောပြပါတယ်။ ရာထူးတိုးချင်တာလည်း ပါမှာပါ။ နံနက်စောစောရောက်တော့ စစ်သူကြီးက ၀သဘကို အသာခေါ်ပြီး မင်းနန်းတော်ကို ထွက်ခဲ့ပါတယ်၊ ၀သဘကို သတ်ဖို့ခေါ်သွားပြီဆိုတာ သိထားတဲ့ စစ်သူကြီးရဲ့မယားက ကွမ်းအလွန်ကြိုက်တဲ့ စစ်သူကြီးအတွက် ထုံးမပါတဲ့ကွမ်းကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
စစ်သူကြီး မင်းနန်းတော်တံခါးဝရောက်လို့ ကွမ်းစားမယ်လည်းလုပ်ရော ထုံးမပါတာတွေ့တာနဲ့ ၀သဘကို အိမ်ပြန်ထုံးယူစေပါတယ်။ ၀သဘက အိမ်ရောက်တော့ စစ်သူကြီးရဲ့မယားက သူကြံစည်တဲ့ အတိုင်းဖြစ်လာလို့ ၀မ်းသာအားရနဲ့ပဲ “ ၀သဘ သင့် ဦးကြီးက သင့်ကို မင်းကြီးဆီအပ်ပြီး သတ်မှာ၊ ရော့ အသပြာတစ်ထောင်ယူပြီး လွတ်ရာကို ပြေးပေတော့” ဆိုပြီး ပြေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ၀သဘလည်း မင်းနဲ့ဝေးတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာ ပုန်းနေပါတယ်။ ရဟန်းတော်တွေကလည်း သူ့ကိုကြည့်ရှုထားကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့နေရင်း တစ်နေ့မှာ ပညာရှိ လူနူတစ်ယောက်က ဝသဘရဲ့ဇာတာကိုကြည့်ပြီး “ သင် မင်းဖြစ်လိမ့်မယ်” လို့ ဟောလိုက်ပါတယ်။ ဒီစကားကြားရတော့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပဲ သတ္တိရှိတဲ့ယောက်ျားတွေ စုရုံးပါတယ်။ အတော်အတန်စုမိတော့ “ မုန့်သည်မ,သားသည် မုန့်အနားကစ၍ စားရသည်” ဆိုတဲ့ ရှေးထုံးကို နှလုံးမူပြီး၊ မြို့စွန်ရွာစွန်ကစပြီး သိမ်းပါတယ်။ လိုရင်းပြောရရင်တော့ နောက်ဆုံး ဝသဘ မင်းဖြစ်သွားတယ်ပဲ ဆိုပါတော့။
ဝသဘ မင်းဖြစ်လာတော့ ဟူးရားပညာရှိတွေကို ဆိတ်ကွယ်ရာခေါ်ပြီး သူဘယ်နှစ်နှစ်လောက် မင်းပြုရမလဲဆိုတာ တွက်ခိုင်းပါတယ်။ ဟူးရားပညာရှိတွေက တွက်ချက်ပြီး “(၁၂)နှစ် မင်းပြုရမယ်”လို့ ဟောလိုက်ပါတယ်။ ဝသဘမင်းက ဟူးရားပညာရှိတွေကို အသပြာတစ်ထောင်ပေးပြီး ဒီအကြောင်း ဘယ်သူ့မှမပြော နဲ့ဆိုပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ရဟန်း၊ သံဃာတွေဆီကပ်ပြီး “အရှင်ဘုရားတို့ မင်းသက်ရှည်ရာရှည် ကြောင်း ကုသိုလ်ကောင်းမှု မရှိဘူးလားဘုရား” လို့ လျှောက်ပါတယ်။
“ဝသဘမင်းမြတ်… ရေစစ်လှူပါ။ နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ ရဟန်းတွေကို ဆေးလှူပါ။ ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြည့် နေတဲ့ ကျောင်းဟောင်း စေတီဟောင်းတွေကို ပြုပြင်ပါ။ ငါးပါးသီလကို နေ့စဉ်စောင့်ထိန်းပါ။ ရှစ်ရက် ဥပုသ်၊ ဆယ့်ငါးရက်ဥပုသ်နေ့တွေမှာ ရှစ်ပါးသီလ၊ ကိုးပါးသီလကို စောင့်ထိန်းပါ။ ဒါဆို မင်းသက်ရှည်လိမ့်မယ်” လို့ မိန့်လိုက်ပါတယ်။
ဝသဘမင်းလည်း ရဟန်းသံဃာတော်တွေ လမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်း ပြုပါတယ်။ စာထဲမှာတော့ ဝသဘမင်းပြုခဲ့တဲ့ ကောင်းမှုတွေ အများကြီးပြထားပါတယ်။ စာရှည်နေမှာစိုးလို့ ရေးမပြတော့ပါဘူး။ လိုရင်းပြောရရင်တော့ ဝသဘမင်းဟာ (၄၄)နှစ် နန်းစံခဲ့ရပါတယ်။
ဒီဝထ္ထုမှာ အဓိကပြောချင်တာက ဝသဘမင်းဟာ အတိတ်ကံအရ(၁၂)နှစ်ပဲ နန်းစံရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အတိတ်ကံကို ပစ္စုပ္ပန်ကံနဲ့ ပြုပြင်ယူလိုက်တော့ (၄၄)နှစ်တောင် နန်းစံခဲ့ရပါတယ်။ အပိုကြေးအနေနဲ့ (၃၂)နှစ် ပိုနန်းစံခဲ့ရပါတယ်။
ဝသဘမင်း ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်(၆)မျိုးက အသက်ရှည်ကြောင်းကုသိုလ်တွေပါ။ သူ့အနေနဲ့တော့ နန်းသက်ရှည်ကြောင်း သီးခြားကုသိုလ်တွေပေါ့။ ဒီကုသိုလ်(၆)မျိုးကို အောက်ပါလင်္ကာလေးနဲ့ တွဲမှတ်ထားလိုက်ပါဦး။ ဗဟုသုတ အဖြစ်ပေါ့။
“ရေစစ်, ဆေးး ကျောင်း အဟောင်းပြုပြင်၊
ဝသဘမင်းကတော့ သူနဲ့အသုံးတည့်မယ့် သက်ရှည်ကြောင်းကုသိုလ်တွေကို ရွေးပြုပြီး ပြုပြင်သွားတာပါ။
အခုစာဖတ်သူတွေကတော့ တခြားဘဝလိုအပ်ချက်တွေ တခြားအဆင်မပြေမှုတွေလည်း ရှိနေကြမှာပါ။
လူမှုရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။ ရာထူးဌာနန္တရနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။ နိုင်ငံခြားခရီးနဲ့ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။ ကြိုက်သလောက် ဆိုးနေပါစေ။ နောက်ဆုံး သေချင်လောက်အောင်အထိ ဆိုးနေစမ်းပါစေ။ ဝသဘမင်းဝထ္ထုကို အာရုံပြုပြီး ဆိုးနေတဲ့ကံကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အသိလေးကိုပဲ အာရုံပြုပစ်လိုက်စမ်းပါ။
အဲဒီအမြင့်ဆုံး သေချင်လောက်အောင်အထိ ဆိုးနေတဲ့ကံကို ကုသိုလ်(၅)မျိုးနဲ့ ပြုပြင်ယူလို့ရပါတယ်။ တိုက်တွန်းစကားအနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ သေချင်လောက်အောင် ဆိုးနေတဲ့ကံကို ကုသိုလ်(၅)မျိုးနဲ့ နေ့စဉ်ပြုပြင် ပစ်လိုက်စမ်းပါ။ ဆိုးနေတဲ့ကံ “နင်နေ ငါသွား” ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကုသိုလ်(၅)မျိုးက ဒါနရယ်, သီလရယ်, ဂုဏ်တော်ရယ်, မေတ္တာရယ်, ဝိပဿနာရယ်ပါ။
အဲဒီကုသိုလ်(၅)မျိုးကို နေ့စဉ်ဖြစ်စေရမယ်လို့ အဓိဋ္ဌာန်ပြီး နေ့စဉ်ပြုလုပ်သွားဖို့ပါပဲ။
ကုသိုလ်(၅)မျိုးထဲက ဒါနဆိုတဲနေရာမှာ ရှင်တစ်သောင်းတွေပြုမှ၊ ကျောင်းကြီးတွေဆောက်လှူမှ ဒါနမဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားကို ရေချမ်းကပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒါနဖြစ်သွားတာပါပဲ။ နောက် ကိုယ်ထမင်းချက်မယ့်ဆန်ထဲက လက်တစ်ဆုပ်စာလောက်လေးနှိုက်ပြီး အိမ်ရှေ့မှာ စာကလေးတွေ၊ ခိုကလေးတွေ ကို ပစ်ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒါနဖြစ်သွားတာပါပဲ။ ဆန်လက်တစ်ဆုပ်စာလောက်တော့ မိသားစုထမင်းဝိုင်း အတွက် သိပ်ပြီးလည်း မထိခိုက်လောက်ပါဘူး။ နေ့စဉ် ဆန်လက်တစ်ဆုပ်စာ ငှက်ကလေးတွေကို ကျွေးနေမယ် ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ဝန်ကိုယ့်အားနဲ့ညီမျှတဲ့ ဒါနဖြစ်နေတာပါ။
သီလမှာလည်း လောကီထဲမှာနေတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် ငါးပါးသီလလောက်ကို လုံလုံခြုံခြုံလေး စောင့်ထိန်းနိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ တော်တော်လုံလောက်သွားပါပြီ။ တစ်ဆင့်တက်ပြီး ဥပုသ်နေ့တွေမှာ ရှစ်ပါးသီလ၊ ကိုးပါးသီလကို စောင့်ထိန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ သီလကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက် သီလကလည်း ကိုယ့်ကို သူ့သတ္တိအားလျော်စွာ ပြန်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။
ဂုဏ်တော်(၉)ပါးထဲက ကိုယ်နှစ်သက်ရာ တစ်ခုခုကို ပွားလို့ရပါတယ်။
အရဟံဂုဏ်တော်ကိုပဲ အရဟံ- ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား၊ အရဟံ- ကိလေသာ ကင်းစင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၊ အရဟံ- စိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ပင် မကောင်းမှုကို ပြုတော်မမူသော မြတ်စွာဘုရားလို့ ပွားလို့ရပါတယ်။
အရဟံဆိုတဲ့ ပါဠိလေးရယ်၊ အရဟံရဲ့အနက် သုံးမျိုးရယ်က ပွားလို့ဆင်ခြင်လို့ သိပ်ကောင်းတဲ့ ပါဠိနဲ့ အနက်ကလေးပါ။
ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့အတွက် ဂုဏ်တော်က သူ့သတ္တိအားလျော်စွာ ပြန်စောင့်ရှောက်နေပါလိမ့်မယ်။
မေတ္တာပွားတဲ့နေရာမှာ ပွားနည်းတွေကတော့ သီးသန့် အကျယ်ကိုရှိပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ “မေတ္တာအတွေးများစာအုပ်” မှာလည်း ပွားပုံပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးပြထားပါတယ်။
မေတ္တာပွားတဲ့နေရာမှာ အဓိကအကြံပေးချင်တာကတော့ ပထမ ကိုယ့်အပေါ် ကျေးဇူးရှိတဲ့ ကျေးဇူးများတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကို တစ်ယောက်ချင်း ကုန်အောင်ပွားပါ။ ပြီးရင် နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကို ကိုယ်စောင့်နတ် အိမ်စောင့်နတ်ကစပြီး လမ်း, မြို့နယ်, မြို့, နိုင်ငံကို စောင့်ရှောက်နေကြတဲ့ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေကို အဆင့်ဆင့်ပွားပါ။ “ငါ၏အိမ်ကို စောင့်ရှောက်နေကြသော နတ်ကောင်းနတ်မြတ်အားလုံး ကိုယ်ဆင်းရဲ ကင်းပါစေ စိတ်ဆင်းရဲ ကင်းပါစေ၊ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ” စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ဝိပဿနာကတော့ ကိုယ်အားထုတ်ဖူးတဲ့နည်းအတိုင်း မှတ်လို့ရပါတယ်။
ကဲ. . . စာဖတ်သူ စိတ်ကူးနဲ့ပဲ ကုသိုလ်(၅)မျိုး စမ်းကြည့်ရအောင်ပါ။
မနက်အိပ်ရာကထတာနဲ့ ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး မိသားစုကိစ္စတွေကို ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဦး။ ဘုရားခန်းကို အရင်သွားပါ။ ဘုရားသောက်တော်ရေကို အရင်ကပ်လိုက်ပါ။ ကပ်ပြီးရင် ငါးပါးသီလ ခံယူလိုက်ပါ။ အဲဒီနှစ်မျိုး ပြီးတော့မှ ဂုဏ်တော်ကို ငါးမိနစ်၊ မေတ္တာကို ငါးမိနစ်၊ ဝိပဿနာကို ငါးမိနစ်ပွားပါ။ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်တော့ အားလုံး လုပ်နိုင်လောက်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဘဝတစ်နေ့တာရဲ့အစကို ကုသိုလ်(၅)မျိုးနဲ့ စလိုက်တာ ဘယ်လောက်ကျက်သရေရှိသွားသလဲ။ မနက် အိပ်ရာထမှာပဲ ကုသိုလ်ငါးမျိုးက ရနေပါပြီ။
အဲဒီလို ကုသိုလ်(၅)မျိုးပြုပြီးမှ မိသားစုရဲ့ ဝေယျာဝစ္စတွေကိုပြုပါ။
အဲလိုနဲ့ မနက်စာစားပြီးသွားတဲ့အခါ ဆန်လက်တစ်ဆုပ်ယူပြီး ခြံရှေ့မှာ ငှက်ကလေးတွေအတွက် ပတ်ကျွေးလိုက်ပါဦး။
ကျွေးပြီးသွားရင် အဆစ်အနေနဲ့ “ဒီနေ့မနက်ပြုတဲ့ ကုသိုလ်(၅)မျိုးကို နတ်ကောင်းနတ်မြတ်အားလုံး ကိုလည်း အမျှဝေပေးပါတယ် အမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူကြပါ။ သာဓု သာဓု သာဓု” ဆိုပြီး နတ်ကောင်းနတ်မြတ် တွေကိုလည်း အမျှဝေပေးလိုက်ပါဦး။
တတ်နိုင်တယ်၊ အချိန်ရတယ်ဆိုရင် ညပိုင်း ကိုရီးယားဇာတ်ကားမလာခင်၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုရီးယားဇာတ် ကား ပြီးသွားတဲ့အခါ ကုသိုလ်(၅)မျိုးကို ထပ်လုပ်လိုက်ပါဦး။
ဒီအတိုင်းသာ နေ့စဉ်ပြုသွားစမ်းပါ။ ဆိုးနေတဲ့ကံဟာ တောင်းပန်ပြီးတောင် ထွက်သွားဦးမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့လုပ် မနက်ဖြန်ဖြစ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးတော့ ဘယ်ဖြစ်မှာလဲ၊ တစ်လတန်သည်၊ နှစ်လတန်သည်၊ တစ်နှစ်တန်သည်တော့ စွဲလုပ်ရပါ့မယ်။ အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ရန်သူက အင်အားကြီးနေတော့ ချက်ချင်းတော့ တောင့်တင်းလာရင် ရန်သူကံဆိုးလည်း ပြန်တောင်တိုက်နေမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကုသိုလ်အင်အားကိုကြည့်ပြီး လန့်ပြေးတော့မှာပါ။
ဒါတွေက ကံဆိုးနေတဲ့သူအတွက် ပြောတာပါ။
ကံကောင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်း အမြဲတမ်း ကံကောင်းနေအောင် ကုသိုလ်(၅)မျိုးကို နေ့စဉ် ပြုနေသင့်ပါတယ်။
ဒီဘဝကုသိုလ်(၅)မျိုးနဲ့ ကံကောင်းအောင် လုပ်နေတဲ့အတွက် ဒုတိယဘဝ၊ တတိယဘဝ စသည်တွေမှာ လည်း ဆက်ပြီး ကံကောင်းနေဦးမှာပါ။
ကုသိုလ်(၅)မျိုးကို ကံကောင်းခြင်း၊ ကံဆိုးခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ နေ့စဉ်ဝတ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပြုနေမယ်။ အဲဒီလိုပြုနေစဉ်အတွင်းမှာပဲ ဘဝအခက်အခဲတစ်ခုနဲ့ ကြုံလာမယ်။ ဒါဆို ကိုယ်ပြုနေတဲ့ ကုသိုလ်(၅)မျိုးကို နေ့စဉ် အမျှပေးဝေနေတဲ့ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကို တိုင်တည်ပြီး သစ္စာဆိုလို့လည်း ရပါတယ်။ “ကျွန်ုပ်သည် ကုသိုလ်(၅)မျိုးကို နေ့စဉ်ပြုပြီး နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တို့ကိုလည်း နေ့စဉ် အမျှပေးဝေခဲ့ပါတယ်။ ဤသစ္စာစကား မှန်ကန်ပါက ယခုတွေ့ကြုံနေရသောအခက်အခဲ ပြေပျောက်ပါစေသတည်း။ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တို့ကလည်း ကူညီမစတော်မူပါ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ကုသိုလ်(၅)မျိုးထဲမှာ ဝိပဿနာလည်း ပါနေတာဆိုတော့ တရားမှတ်ရင်း ပါရမီပါခဲ့ရင် အရဟတ္တမဂ် အရဟတ္တဖိုလ်ဆိုတဲ့ တရားထူး တရားမြတ်တွေရသွားပြီး သံသရာဝဋ်ကတောင် ကျွတ်သွားဦးမှာပါ။
ကုသိုလ်(၅)မျိုးကို ဘယ်အဆင့်အထိ ပြုရမလဲဆိုရင် ညအိပ်ရာဝင်လို့မှ ဒီနေ့တစ်နေ့တာ ကုသိုလ်(၅)မျိုးကို မပြုဖြစ်လိုက်ရင် အိပ်လို့မပျော်တဲ့အဆင့်အထိ ပြုရပါ့မယ်။
ကဲ. . . စာဖတ်သူ ကံနဲ့ပတ်သက်လို့ “သေချင်လောက်အောင်ဆိုးနေပါစေ” ကုသိုလ်(၅)မျိုးနဲ့သာ နေ့စဉ် ပြုပြင်လိုက်စမ်းပါ။ မကြာခင် ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
Posted by Alex Aung at 4:02 AM No comments:
ဝက်သား ကင်မ်ချီ ပဲကြာဆံသုပ် _ တုန်ယမ်းဖက်ထုပ်ကြော်_ကြက်သားမဆလာခေါက်ဆွဲကြော် _ဖက်ထုပ်ပြုတ်
‌ဒီဖက်ထုပ်ပြုတ်က လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး အရသာလည်းရှိတဲ့ ဟင်းလျာလေးပါ။ သားသား၊ မီးမီးတို့အတွက် ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ အလွယ်တကူ ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပြီး အကြိုက် တွေ့စေတဲ့ ဖက်ထုပ်ပြုတ် ဖြစ်ပါတယ်။
• ဝက်သား - ၁ဝဝ ဂရမ်
• ဆီ - လိုအပ်သလို
• ကြက်သွန်ဖြူ - ၃ မြွှာ (ဓားပြားရိုက်ပါ)
• ကြက်သွန်နီ - ၁ လုံး (၄ စိတ်စိတ်ပါ)
• မုန်လာဥနီ၊ ဂေါ်ဖီ၊ မုန်ညင်း၊
ကြက်သွန်မြိတ် - အနည်းငယ်စီ
• ဖက်ထုပ်အရွက် - ၂၀ ရွက်ခန့်
• ဟင်းခတ်မှုန့် - အနည်းငယ်
၁။ ဇလုံတစ်လုံးထဲ ဝက်သားကို ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ဆား၊ သကြား၊ ကော်မှုန့်နှင့် ဆီ အနည်းငယ်ထည့်ပြီး အရသာ နယ်ပါ။
၂။ အသားလုံး ၅ လုံးခန့် လုံးပါ။
၃။ ဝက်သားပြားကို ဖက်ထုပ်ထဲ ထည့်ပါ။
၄။ ဖက်ထုပ်ကို ပြုတ်ပါ။
၅။ ရေဆူလာလျှင် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန် မြိတ် အနည်းငယ်၊ ဆား၊ သကြား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ဟင်းခတ်မှုန့်နှင့် ပဲငံပြာရည်အကြည်တို့ကို ထည့်ပါ။
၆။ ရေဆူလာလျှင် ဝက်သားလုံးနှင့် ဖက်ထုပ်ကို တစ်ခါ
၇။ ပဲပြားကို ထည့်ပါ။
၈။ ရေဆူလာလျှင် ပါးပါးလှီးထားတဲ့ အသီးအနှံများ
၉။ ပြီးလျှင် ပန်းကန်မှာပြင်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ဒီခေါက်ဆွဲကြော်လေးကတော့ တစ်မျိုးဆန်းသစ်စေမယ့် လွယ်ကူ ရိုးရှင်းတဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော်လေးပါ။
• ခေါက်ဆွဲ - ၁ဝဝ ဂရမ်
• ဂေါ်ဖီ - ၅ ဂရမ် (ပါးပါးလှီးပါ)
• ကြက်သား - ၁၅၀ ဂရမ်
• ခရမ်းချဉ်သီး - ၂ လုံး (အနေတော်လှီးပါ)
• ငရုတ်သီးစိမ်း - ၅ တောင့် (ထက်ခြမ်းခြမ်းပါ)
• ကြက်သွန်ဖြူ - ၅ မြွှာ (ဓားပြားရိုက်ပါ)
• ကြက်သွန်နီ - ၁ လုံး (နုပ်နုပ်စဉ်းပါ)
• ကြက်သွန်မြိတ် - အနည်းငယ် (အနေတော်လှီးပါ)
• မဆလာ - စားပွဲဇွန်း ၁ ၁/၂ ဇွန်း
• ကြက်ဥ - ၁ လုံး
• ငရုတ်အနှစ် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
• မုန်လာဥနီ - ၅ ဂရမ်
၁။ ကြက်သားကို ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ နနွင်းမှုန့်၊
ကော်မှုန့်၊ သကြား၊ ငံပြာရည်နှင့် ဆီတို့ကို ထည့်ပြီး အရသာ နယ်ပါ။
၂။ ခေါက်ဆွဲထဲ ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ၃ မိနစ်ခန့်
၃။ ၃ မိနစ်ပြည့်လျှင် ရေအေးနှင့် ဆေးပါ။
၄။ ဒယ်အိုးကို အပူပေးပြီး ဆီထည့်ပါ။
၅။ ဆီပူလာလျှင် ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ကြက်သွန်နီကို ဆီ သတ်ပါ။
၆။ အနံ့မွှေးလာလျှင် ငရုတ်အနှစ်ထည့်ပါ။
၇။ ခရမ်းချဉ်သီးကို အနှစ်ရသည်အထိ ထည့်နှပ်ပါ။
၈။ မဆလာ၊ ဆား၊ သကြား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်နှင့် ငံပြာရည် တို့ကို ထည့်ပါ။
၁၀။ အရသာနယ်ထားတဲ့ ကြက်သားထည့်ပါ။
၁၁။ နုပ်နုပ်စဉ်းထားတဲ့ မုန်လာဥနီနှင့် ထက်ခြမ်းခြမ်းထားတဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်ပါ။
၁၂။ ကြက်ဥ ၁ လုံးကို ထည့်ကြော်ပါ။
၁၃။ ရေဆူလာလျှင် ခေါက်ဆွဲထည့်ပြီး ကြော်ပါ။
၁၄။ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ မုန်လာဥနီနှင့် ဂေါ်ဖီတို့ကို ထည့်ပါ။
၁၅။ လိုအပ်တဲ့အရသာများ ထည့်ပါ။
၁၆။ အနံ့အရသာ ပြည့်စုံလျှင် ပန်းကန်မှာပြင်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ဒီဖက်ထုပ်ကြော်က တုန်ယမ်းအနံ့အရသာလည်း ရှိသလို လွယ်ကူရိုးရှင်းလှတဲ့ ဖက်ထုပ်ကြော်ဖြစ်ပါတယ်။
• ကြက်ဥ - ၁ လုံး
• ဝက်သား - ၁၅၀ ဂရမ် (ကြိတ်ထားပါ)
• ငရုတ်သီးစိမ်း - ၃ တောင့် (ပါးပါးလှီးပါ)
• ဖက်ထုပ်ရွက် - ၂၀ ရွက်ခန့်
• တုန်ယမ်းခဲ - ၁ ခဲ
• ကြက်သွန်မြိတ် - အနည်းငယ် (နုပ်နုပ်စဉ်းပါ)
• ရှမ်းနံနံ - အနည်းငယ် (နုပ်နုပ်စဉ်းပါ)
၁။ ကြက်ဥ ၁ လုံးကို ဖောက်ပြီး ခေါက်ထားပါ။
၂။ ကြိတ်ထားတဲ့ ဝက်သား၊ နုပ်နုပ်စဉ်းထားတဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ရှမ်းနံနံ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ သကြား၊ ကော်မှုန့်၊ တုန်ယမ်း အနှစ်နှင့် ကြက်ဥတို့ကို ထည့်ပြီး နှံ့အောင်နယ်ပါ။
၃။ ဝက်သားရလျှင် ဖက်ထုပ်ရွက်ထဲ ထည့်ပြီး ဖက်ထုပ်ထုပ်ပါ။
၄။ ပြီးလျှင် ဖက်ထုပ်ကို ကြော်ပါ။ အရောင်သန်းလာပြီး ကျက်ပြီ ဆိုလျှင် ရပါပြီ။
ဝက်သား ကင်မ်ချီ ပဲကြာဆံသုပ်
ဒီဟင်းလျာလေးကတော့ ကင်မ်ချီအရသာကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိသတ်များအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမယ့် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ ဟင်းလျာဖြစ်ပါတယ်။
• ဝက်သားသုံးထပ်သား - ၂ဝဝ ဂရမ်
• တရုတ်နံနံ - အနည်းငယ် (အနေတော်လှီးပါ)
• မုန်လာဥနီ၊ ဂေါ်ဖီ - ၁၀ ဂရမ်စီ (ပါးပါးလှီးပါ)
• ကင်မ်ချီ - ၁ဝဝ ဂရမ်
• ပဲကြာဆံ - ၅ ဂရမ် (၂၀ ဂရမ် ရေစိမ်ပြီး)
• ပဲငံပြာရည်အနောက် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ကြက်သွန်ဖြူ - ၄ မြွှာ (ဓားပြားရိုက်ပါ)
• နှမ်း - အနည်းငယ်
• သကြား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း
၂။ ဝက်သားသုံးထပ်သားကို အနေတော်လှီးထားပါ။
၃။ ပဲကြာဆံကို ရေနွေးဆူဆူထဲမှာ ဆားထည့်ပြီး ရေနွေးဖြောပါ။
၄။ ၁ မိနစ်ခန့် ရေနွေးဖြောပြီးလျှင် ပဲကြာဆံကို ပြန်ဆယ်ယူပြီး ရေအေးနှင့် ပြန်ဆေးပါ။
၅။ ဒယ်အိုးကို အပူပေးပြီး ဆီထည့်ပါ။
၆။ ဆီပူလာလျှင် ကြက်သွန်ဖြူကို ဆီသတ်ပါ။
၇။ ကြက်သွန်ဖြူဆီသတ်ပြီးလျှင် ဝက်သားသုံးထပ်သား ထည့်ပါ။
၈။ ဝက်သားအနံ့မွှေးလာလျှင် လှီးထားတဲ့ ဂေါ်ဖီ၊ မုန်လာဥနီနှင့် ကင်မ်ချီထည့်ပါ။
၉။ အရသာအတွက် ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည်အနောက်၊ ဆား၊ သကြား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်နှင့် နှမ်းတို့ကို ထည့်ပါ။
၁၁။ ရေဆူလာလျှင် ရေနွေးဖြောထားတဲ့ ပဲကြာဆံထည့်ပါ။
၁၂။ ဖောက်ပြီး ခေါက်ထားတဲ့ ကြက်ဥကို ထည့်မွှေပါ။
၁၃။ တရုတ်နံနံနှင့် ကြက်သွန်မြိတ်ကို ထည့်ပါ။
၁၄။ အနံ့အရသာပြည့်စုံလျှင် နှမ်းအနည်းငယ်ထည့်ပြီး သုံးဆောင် နိုင်ပါပြီ။
ကြက်သားမဆလာထမင်းကြော် - ကြက်သားကြေးအိုး - ဆိတ်ခြင်ဆီရိုးစွပ်ပြုတ် - Chilli Crab
• ထမင်း - ၁ ပွဲ
• ငရုတ်သီးစိမ်း - ၅ တောင့်ခန့် (ထက်ခြမ်းခြမ်းပါ)
• မုန်လာဥနီ - ၅ ဂရမ် (အတုံးလေးများတုံးပါ)
၁။ ကြက်သားကို ပါးပါးလှီးပါ။ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကြက်သားကို ဆား၊ သကြား၊ ငရုတ် ကောင်းမှုန့်၊ နနွင်းမှုန့်၊ မဆလာ၊ ဆီနှင့် ကော်မှုန့် အနည်းငယ် ထည့်ပြီး အရသာနယ်ပါ။
၂။ ဒယ်အိုးကို အပူပေးပြီး ဆီထည့်ပါ။
၃။ ဆီပူလာလျှင် ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ကြက်သွန်နီကို ဆီသတ်ပါ။
၄။ အနံ့မွှေးလာလျှင် ငရုတ်အနှစ်ထည့်ပါ။
၅။ ခရမ်းချဉ်သီးကို အနှစ်ရသည်အထိ ထည့်နှပ်ပါ။
၆။ မဆလာ၊ ဆား၊ သကြား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်နှင့် ငံပြာရည်တို့ကို ထည့်ပါ။
၈။ အရသာနယ်ထားတဲ့ ကြက်သားထည့်ပါ။
၉။ နုပ်နုပ်စဉ်းထားတဲ့ မုန်လာဥနီနှင့် ထက်ခြမ်းခြမ်းထားတဲ့ ငရုတ်သီးကိုထည့်ပါ။
၁၀။ ကြက်ဥ ၁ လုံးကို ထည့်ကြော်ပါ။
၁၁။ ထမင်းထည့်ပြီး ကြော်ပါ။
၁၂။ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်နှင့် မဆလာကို ဖြူးပြီး ထည့်ပါ။
၁၃။ အနံ့၊ အရသာ ပြည့်စုံလျှင် ပန်းကန်မှာပြင်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ကြေးအိုးကို လူကြီး၊ လူငယ်မရွေး နှစ်သက်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အာဟာရလည်းဖြစ်သလို ပြုလုပ်ရလွယ်ကူပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ညစာအဖြစ်လည်း သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ချက်နည်းများ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူညီကွဲပြားမှုများ ရှိကြမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီနည်းလေးကတော့ လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့
• ကြက်ရိုးပြုတ်ရည် - ၁ အိုး
• ကြက်သားလုံး - ၅ လုံး
• ဆန်ကြာဆံ (သို့) ဆန်ပြားခေါက်ဆွဲ - လက်တစ်ဆုပ်
• မုန်ညင်းဖြူ (သို့) မုန်ညင်းစိမ်း - ၂ ပင်
• ရွှေပဲသီး/ပန်းပွင့် - လက်တစ်ဆုပ်ခန့်
• ငုံးဥ - ၃ လုံး
• ငါးဖယ်လုံး - ၃ လုံး
• ဆား - စားပွဲဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း
• ဟင်းခတ်မှုန့်/သကြား - အနည်းငယ်
• ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် - optional
• တွဲဖက်စားရန် ဆော့စ်
၁။ ကြေးအိုးပြုလုပ်ရန်အတွက် ဦးစွာ ကြက်ရိုးပြုတ်ရည်ကောင်းကောင်း လိုအပ်ပါတယ်။ ကြက်ရိုးပြုတ်ရည်ပြုလုပ်ရန် ကြက်ရိုးကို ရေဆေးသန့်စင်ထားပါ။အိုးတစ်အိုးမှာ ရေဆူအောင်တည်ပြီး ဆူပွက်လာပါက ကြက်ရိုးကို ထည့်၍ ၂ မိနစ်ခန့် တည်ပြီး အထက်အောက်မွှေ၍ အရိုးများကို ဆယ်ယူပါ။ နောက်အိုးတစ်အိုးထဲ ရေနွေးဖြောထားသော ကြက်ရိုးများထည့်ပြီး လိုအပ်သောရေပမာဏထည့်ပါ။ ချင်းအနည်းငယ်ထုထည့်ပါ။ မုန်လာဥဖြူရှိလျှင် ထည့်ပြီး ဆူပွက်အောင်တည်ပါ။ ဆူပွက်ပါက မီးကို အသေးဆုံးအထိ လျှော့ချပြီး မီးအေးအေးဖြင့် ၃ နာရီခန့် တည်ပါ။ အပေါ်ယံတက်လာသော အညစ် အကြေးများကို ခပ်ထုတ်ပါ။ မီးပြင်းပြင်းဖြင့် ဆူပွက်အောင် မတည်ရပါ။ ကြက်ပြုတ်ရည်များ ဖြူဖွေးပြီး နောက်သွားတတ်ပါတယ်။
၂။ ကြက်ရိုးပြုတ်ရည်အစား ကြက်သားတုံးများကို အသုံးပြုပြီး ကြက်ရိုးပြုတ်ရည်အဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။
၃။ ကြက်ပြုတ်ရည်တည်ထားစဉ် ကြေးအိုးပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်ထားပါ။
၄။ ကြာဆံကို ၁ နာရီခန့် ရေစိမ်ထားပါ။ မုန်ညင်း၊ ရွှေပဲသီး၊ မုန်လာဥနီနှင့် ငါးဖယ်လုံး တို့ကို လှီးဖြတ်ထားပါ။ ငုံးဥပြုတ်ထားပါ။ ကြက်သားကို နုပ်နုပ်စဉ်း၍ ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်/ကော်မှုန့်ထည့်ပြီး သမအောင်မွှေ၍ အလုံးလေးများ လုပ်ထားပါ။
၅။ အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပါက စားခါနီးမှသာ ကြေးအိုးချက်ပါ။ ကြေးအိုးချက်ရန် အိုးသေးသေးတစ်အိုးထဲ ကြက်ရိုးပြုတ်ရည်တစ်ပွဲစာ ထည့်ပါ။ ကြက်သား နှင့် ကြာဆံထည့်ပြီး ဆူပွက်အောင် တည်ပါ။ ဆား၊ သကြားနှင့် ဟင်းခတ်မှုန့်ထည့်ပါ။ ကြာဆံနူးပါက မုန်ညင်း၊ မုန်လာဥနီ၊ ရွှေပဲသီး၊ ငါးဖယ်လုံးနှင့် ငုံးဥပြုတ်တို့ကို ထည့်ပါ။ ဆန်ပြားခေါက်ဆွဲဖြင့် စားလိုပါက ဆန်ပြားကို ပန်းကန်ထဲမှာ ထည့်ထားပြီးမှသာ ချက်ပြီးသား ဟင်းချိုကို လောင်းထည့်ပါ။
၆။ အရသာအပေါ့အငန်မြည်း၍ ပန်းကန်ထဲမှာ တည်ခင်းပြီး ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်နှင့် ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ဖြူး၍ နှစ်သက်ရာဆော့စ်ဖြင့် တွဲဖက်သုံးဆောင် နိုင်ပါပြီ။
နာမည်ကြီးပြီး လူကြိုက်များတဲ့ ကြေးအိုးပြုလုပ်နည်းလေးကို တင်ပြပြီးသား ဖြစ်တာမို့ ကြေးအိုးနည်းတူ လူကြိုက်များတဲ့ ကြေးအိုးဆီချက်ပြုလုပ်နည်းကို တွဲဖက် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
• ဆားရည် (သို့) ပဲငံပြာရည်အကြည် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် - ၂ ဇွန်း
၁။ ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ပုံအစမှာ ကြေးအိုးနည်းတူဖြစ်ပြီး ကြက်ပြုတ်ရည်ထဲ ပါဝင်ပစ္စည်း များထည့်ပြုတ်၍ ကြက်သားကျက်ပြီး ကြာဆံနူးအိပါက ဆန်ခါတစ်ခုဖြင့် အရည် များကို စစ်ချပေးပါ။ ဆန်ပြားဖြင့် ပြုလုပ်လိုပါက နောက်ဆုံးမှသာ ဆန်ပြားကို ရောထည့်ပြီး ဆန်ခါဖြင့် စစ်ပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ဇလုံငယ်တစ်ခုထဲထည့်ပါ။ ဆားရည် (သို့) ပဲငံပြာရည်အကြည် ၁ ဇွန်း ထည့်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် ၂ ဇွန်း ထည့်၍ သမအောင် တူဖြင့် ဆွပြီး မွှေပါ။
၃။ အရသာအပေါ့အငန်မြည်း၍ တည်ခင်းမည့်ပန်းကန်မှာ ကြာဆံဖတ်များ ဦးစွာ ထည့်ပြီး အပေါ်မှာ ကျန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ကြက်သားလုံး၊ ငါးဖယ်လုံးနှင့် ငုံးဥတို့ကို ထည့်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် အနည်းငယ်ဖြူးပြီး နှစ်သက်ရာဆော့စ်နှင့် ကြက်ပြုတ်ဟင်းချိုတို့ဖြင့် တွဲဖက်တည်ခင်းနိုင်ပါပြီ။
ဆိတ်ခြင်ဆီရိုးစွပ်ပြုတ်က အညှီနံ့ကင်းပြီး အားလည်းရှိစေပါတယ်။ နံပြားနဲ့စားလည်း ကောင်းပါတယ်။
• ဆိတ်ခြင်ဆီရိုး - ၂၅ ကျပ်သား
• ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက် - ၂၀ ရွက်ခန့်
• အရသာမှုန့် - အနည်းငယ် (ဇွန်းဖျားခန့်)
• သံပရာသီး - ၁ စိတ်
(ပါယား) ဆိတ်ရိုးကို ရေ ၃ ထပ်လောက် ပြောင်အောင် ဆေးပါ။ ပြီးလျှင် ဂျုံမှုန့်ကို ရေဖျော်ပြီး ၅ မိနစ်ခန့် စိမ်ထားပါ။ ရေပြန်ဆေး၍ ရေနွေးဆူဆူထဲ အရိုးကို ၂ မိနစ် ထည့်ပြုတ်ပြီး ရေအေးနှင့် ပြန်ဆေးထားပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ဆိတ်ရိုးကို ပိုင်နိုင်စွာနယ်ပြီး အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်ခန့် နှပ် ထားပါ။ တည်ခါနီး ဆိတ်ရိုးထဲ ရေနွေးလောင်းပြီး တည်ပါ။ တည်တာလွန်သွားလျှင် ခြင်ဆီများ အပြင်ထွက်လာတတ်လို့ အနေတော်လေးပြုတ်၍ ချခါနီးမှာ မဆလာအနည်းငယ်ထပ်အုပ်ပြီး သောက်လို့ရပါပြီ။ ဒီအတိုင်းလည်း သောက်လို့ ကောင်းသလို ပျစ်ပျစ်သောက်ချင်လျှင် ကုလားပဲ အနည်းငယ် ထည့်ပြုတ်ပါ။ အစေ့ပျောက်ပြီး နူးအိသည်အထိ တည်ပါ။
Chilli Crab (ကဏန်းငရုတ်သီးအနှစ်ချက်)
• ကဏန်း - ရဝဝ ဂရမ်
• ငရုတ်သီးအနှစ် - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
• ပတဲကော - အနည်းငယ်
• ဆီတိုဟူး - အနည်းငယ်
• ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
• သကြား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ရေ - ၃၀ မီလီလီတာ
• ဆီ - ၃၀ မီလီလီတာ (ကြော်ရန်)
၁။ ဦးစွာ ကဏန်းတွေကို သန့်စင်အောင် ရေဆေးပြီး ဆီပူပူထဲ ထည့်၍ ကြော်ပါ။ ကြော်ထားတဲ့ ကဏန်းတွေကို ဆီစစ်ပြီး သီးသန့်ဖယ်ထားပါ။
၂။ စပါးလင်၊ ချင်း၊ ပတဲကော၊ ကြက်သွန်နီနှင့် ကြက်သွန်ဖြူတို့ကို ထောင်းပါ။ အိုးထဲ ဆီ အနည်းငယ်ထည့်ပြီး ထောင်းထားတဲ့အနှစ်များကို ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် ငရုတ်သီးအနှစ်၊
ဆီတိုဟူး၊ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်၊ ရေ၊ သကြား၊ ဆားနှင့် ကဏန်းတို့ကို ထည့်ပြီး ၅ မိနစ်ခန့် တည်ထားပါ။
၃။ နောက်ဆုံးမှာ ကြက်ဥခေါက်ထားတာ ထည့်ပါ။ ကော်မှုန့်ကို ရေဖျော်ပြီး ထည့်၍ မွှေပြီး နံနံပင်လေးအုပ်ကာ အရသာရှိတဲ့ ကဏန်းငရုတ်သီးအနှစ်ချက်လေးကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ကြက်ဆီထမင်းလုံး - ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ - နှမ်းထမင်း -ပဲ...
အသက် ၅၀ ကျော်သူတိုင်း သတိပြုသင့်သော အစာဟောင်းအိမ်က...
ဝက်သား ကင်မ်ချီ ပဲကြာဆံသုပ် _ တုန်ယမ်းဖက်ထုပ်ကြော်...
ကြက်သားမဆလာထမင်းကြော် - ကြက်သားကြေးအိုး - ဆိတ်ခြင်...
“အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများကို ရပ်တန့်ပစ်...
လေဖြန်းခြင်းမှ လေဖြတ်ခြင်း မဖြစ်အောင်...